အားလုံးရှေ့နေများအတွက်ဂျပန်အကြီးဆုံးအွန်လိုင်း။ အကြီးဆုံးဥပဒေရေးရာအ ရှေ့နေ။
မုန့်ဖုတ် တို့သည်လည်းတရားဝင်ခြွင်းချက်ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုလည်ပတ်မှုအတွက်ဂျပန်နိုင်ငံနှင့်နိုင်ငံတကာဆယ်စုနှစ်လေးခုများ၊နှင့်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်အသက်အကြီးဆုံး၊ ဖြ၎င်း၏တံခါးရွက်အဖြစ်ဆက်စပ်ရုံးဝန် သာ ၁၉၇၂။ ကျနော်တို့လောလောဆယ်တွင်ကျော်ရှိသည်။ ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီ၏အကျဉ်းချုပ် သည်ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးအကြားနိုင်ငံတကာဥပဒေကိုကုမ္ပဏီများ၊စီးပွားရေးဥပဒေအကြံဉာဏ်၏အရည်အသွေးအမြင့်ဆုံးတစ်လျှောက်လုံးဥရောပ၊အရှေ့အလယ်ပိုင်း၊အာရှနှင့်အမေရိကန်။ ကျော်နှင့်အတူ ၂၊ငါးရာရှေ့နေများအတွက်နှစ်ဆယ်ခုနစ်ဓိကစီးပွားရေးစင်တာများကမ္ဘာအဝှမ်းများကိုပြည့်စုံ။ ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီ၏အကျဉ်းချုပ် ကြွေးဟာသူ့ရဲ့ဂုဏ်သတင်းနှင့်ဇာတ်ကောင်၊သိက္ခာ၊စွမ်းရည်များ၊နှင့်ရှင်စိတ်ဓါတ်ကို၎င်း၏ရှေ့နေနှင့်ဝန်ထမ်းများ၊နှင့်အတူစတင်တည်ထောင်သူ ၊၊၊၊နှင့်ဆက်လက်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုကိုအများပြည်သူအတွက်ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ကော်ပိုရိတ်ဥပဒေကိုအဓိက ။ ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီ၏အကျဉ်းချုပ် ဦးဆောင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီကော်ပိုရေးရှင်းများ၊ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့်အစိုးရ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှာအတွက်ကော်ပိုရိတ်၊ဘဏ္ဍာရေး၊ဓာတ္ပံု၊နှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု၏ပိုင်ဆိုင်မှုအတွက်စွမ်းအင်အရင်းအမြစ်များနှင့်အခြေခံအဆောက်အဦ ကဏ္ဍ။ ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီ၏အကျဉ်းချုပ်မှာ ၊ကျနော်တို့ရဲ့ရှေ့နေများအပြည့်အဝအတွက်စေ့စပ်အောင်မြင်တဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့ဖောက်သည်များ။ ကျွန်တော်တို့ကယ်နှုတ်ရလဒ်တွေကိုလည်းတိုင်ပင်ေကော်ပိုရေးရှင်းမှာအားလုံးအဆင့်ဆင့်၏အတိုးတက်မှုနှုန်းသံသရာမှစိန်ခေါ်မှု၏တောင်းဆိုချက်များဘဏ္ဍာရေးငွေကြေးလွှဲပြောင်းနှင့်လုံခြုံရေးမှအကမ်း။ ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီ၏အကျဉ်းချုပ် တက္ကတစ်ဦးဖြစ်သည်ကမ္ဘာ့အပထမတန်းစားဥပဒေကိုကုမ္ပဏီ။ အတွက်လူသိများကျွန်တော်တို့ရဲ့လိမ္မာအလုပ်အတွက်အလွန်ရှုပ်ထွေးပြီးအရေးပါကြောင်းအရေးပါသည့်အပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်၊အကျွန်ုပ်တို့သည်ပူဇော်အမြင့်ဆုံးအဆင့်ဆင့်၏ထူးချွန်နှင့်အနံနှံ့အားလုံးကျွန်ုပ်တို့၏အလေ့အကျင့်နှင့်အထူး။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်အများအပြားစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်သည်။ ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီ၏အကျဉ်းချုပ်ပေါလု၊၊၊ကစ္စတပ် တဲ့ကုမ္ပဏီအပိုပြီးထက်ခြောက်လအရာရှေ့နေနှင့်အတူ၊ကွဲပြားနောက်ခံ၊ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး၊အတွေးအခေါ်နှင့်အကျိုးစီးပွား၊သူပူးပေါင်းအတူဖောက်သည်ကူညီဖို့၊သူတို့ကိုအောင်နိုင်သူတို့၏အရေးအကြီးဆုံးဥပဒေရေးရာစိန်ခေါ်မှုများနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်ကြာမြင့်စွာရပ်တည်မှုဖောက်သည်င္သည္။ ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီ၏အကျဉ်းချုပ် ဥပဒေသည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီအတွက်ဖြျ၊ အားလုံးကိုဖုံးအုပ်၏အပန္မွာဧရိယာ။ အဆိုပါကုမ္ပဏီကကမ်းလှမ်းန်ဆောင်မှုများ၏အကွာအဝေးကနေနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ဓာတ္ပံုကိုဗီဇာေလွ်ာက္ထားင္ငံတကာဖောက်သည်များမှာနှစ်ဦးစလုံးအိမ်နှင့်ပြည်ပမှာရှိသကဲ့သို့ကောင်းစွာအဖြစ်ဂျပန်။ အသေးစိတ်ကို၊သွားရန်'။ ဥပေဒအမွားမ်ား'။ အရှေ့နေများအတွက်နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်ရဲ့တိုကျိုရုံးတွေကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်လိုအပ်နှင့်စိန်ခေါ်မှုများအကြောင်းဖောက်သည်များနှင့်ရင်ဆိုင်ရ။ များမှတဆင့်ပေါင်းစပ်၏ကုမ္ပဏီ၏ရင်းနှီးသောအသိပညာကိုဂျပန်စျေးကွက်နှင့်၎င်း၏ကျယ်ပြန့်ပထဝီအနေရောက်ရှိရေး၊ကုမ္ပဏီအပြည့်အဝထားအစေခံရန်နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်စီးပွားလိုအပ်ချက်များကိုဖောက်သည်များ၏။ ဋဌဘီလ်ဂိတ် ကိုယ်စားပြုဦးဆောင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကော်ပိုရေးရှင်းများ၊တိုးတက်မှုနှင့်အလယ်တန်းစျေးကွက်ကုမ္ပဏီများ၊အရင်းအနှီးဈေးကွက်သူများနှင့်လုပ်ငန်းရှင်တိုင်းအတွက်အဓိကလုပ်ငန်းအုပ်စုအဖြစ်ပြည်သူ့ကဏ္ဍအဖွဲ့အစည်းများ၊ပညာရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၊ပရဟိတအဖွဲ့အစည်းနှင့်လူတစ်ဦးချင်းစီ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အလေ့အကျင့်ဖြစ်ပါတယ် ။ ဆက္ဖတ္ရန္တဦးဖြစ်လာခဲ့သည်အကြီးဆုံးဥပဒေရေးရာဝန်ဆောင်မှုပေးအတွက်ကမ္ဘာ့ ၂၀၀၅ မှတဆင့်တစ်ဦးကုမ္ပဏီနှစ်ခုမပေါင်း၏အဖူးအတိုင်းအတာအတွက်ဥပဒေကဏ္ဍမှာပေါ့။ နေစဉ်ကြီးမားတဲ့အတွက် အတိုင်းအတတ်မဟာဗျူဟာရိုးရှင်းခဲ့ပါတယ်-ကိုဖန်တီးရန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေကျင့်ထိုက်၏၏စောင့်ရှောက်မှုယူပြီးအရေးအပါဆုံးဥပဒေကြောင်းအရလိုအပ်၏။ စိတ်ကူးအရတော့ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီတွင်တည်ရှိသည်။ အလေ့အကျင့်အဖုံးအထွေထွေကော်ပိုရိတ်၊အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ဓာတ္ပံု။ ကျနော်တို့ရည်ရွယ်ချက်များကိုအရည်အသွေးမြင့်မားဥပဒေကြောင်းအရအကြံဉာဏ်အပေါ်ဥပဒေများအတွက်အများဆုံးအ ။ ဂန်ရွပ္အက်ႌရဲ့တိုကျိုရုံးကမ်းလှမ်းကျွန်ုပ်တို့ခေတ်၊ထိရောက်သောဥပဒေရေးရာအကြံဉာဏ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရုံးပေါင်းစပ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအရင်းအမြစ်များ၏ဂန်ရွပ္အက်ႌအတူကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အသိပညာ၏ဂျပန်ဖက်စပ်အဖော်၊ အပေါင်းအသင်းတော်အားဖြင့်၊ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂန်ရွပ္အက်ႌ- ဖက်စပ်။ ရှေ့နေများအတွက်။ မဏ္ဍိုင် ရိဒ် ကိုယ်စားပြုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအထိပုဂ္ဂလိကပိုင်မှ-ကုမ္ပဏီအကြီး၊အများပြည်သူ-ကုန်သွယ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကော်ပိုရေးရှင်းများ။ ကုမ္ပဏီရဲ့သုံးရာရှေ့နေများအကြံပေးရွင္မ်ားႏွင့္ကုန္သြယ္မႈလုပ္ငန္းအပါအဝင်၊ပူးတွဲလုပ်ဆောင်ခြင်းဝယ်ယူ၊ နှင့်စပ်လုပ်ငန်းများ၊စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း။ အဆောက်အဦမှဆုချီးမြှင့်-အနိုင်ရတဲ့ဘဏ္ဍာရေးနှင့် အလေ့အကျင့်၊ ထွင်ခဲ့သည်အနက်၏ကၽြမ္းက်င္မႈကြောင်းတစ်လျှောက်လုံး၏လယ်ကွက်၏စီးပွားရေးနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဥပဒေ။ အဆိုပါကုမ္ပဏီရှိအသိအမှတ်ပြုထူးချွန်များအတွက်၎င်း၏ဆန်းသစ်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်များအတွက်ဘဏ္ဍာရေး၊အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်အတွက်စီမံကိန်း။ ဥပေဒအုပ်စုတွင်လော့စ်အိန်ဂျလိစ်၊ကဲ့သို့၊အထူးပြုအတွက်အသိဉာဏ်ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု၊စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၊ဖျော်ဖြေရေး၊အိမ်ခြံမြေ၊ကုန္ပစၥည္းတာဝန်၊အလုပ်သမားနှင့်အလုပ်အကိုင်ပညတ်တရား။ အသေးစားကုမ္ပဏီကိုယ်စားပြုဖောက်သည်များအတွက်ကယ်လီဖိုးနီးယား၊ဂရိတ်ဗြိတိန်၊ဂျပန်နှင့်ပေ။ ကုမ္ပဏီမှပေးအရည်အသွေးမြင့်ကိုယ်စားပြုဘဲ။ အို လော အသိအမှတ်ပြုတစ်ဦးအဖြစ်ဦးဆောင်နိုင်ငံတကာဥပဒေကိုကုမ္ပဏီအတွက်တရုတ်နှင့်အတူ၊အလေ့အကျင့်အဖုံးအုပ်တစ်ကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးများ၏စက်မှုလုပ်ငန်းများ၊ဖောက်သည်များ၊နှင့်အရေးပါပါတယ်။ ကျနော်တို့ကိုပူဇော်တစ်မူထူးခြားသောပေါင်းစပ်တရုတ်ပြည်တွင်းသိ-ဘယ်လိုနှင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီထူးချွန်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မိမိကိုယ်ကိုမိမိဂုဏ်ယူနှင့်အချက်ကိုအပေါ်။ သည်တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကုမ္ပဏီကျော်နှင့်အတူ ၁၊၀၀၀ ရှေ့နေနှင့်အတူတဆယ်ရုံး။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများမျှဝေမြင့်မားသောစံချိန်စံညွှန်းများ၊ကတိကဝတ်မှထူးချွန်ပြီး၊ တစ်စိတ်များအတွက်ကူညီ၎င်းတို့၏ဖောက်သည်များအောင်မြင်။ ကုမၸဏီအလေ့အကျင့်ကိုကိုယ်စားပြု၏အချို့အများဆုံးတက်ကြွတဲ့ကုမ္ပဏီအတွက်။ ။။။တစ်ဦးဖြစ်သည်အိုင်ယာလန်၏တရားဥပဒေကိုကုမ္ပဏီများအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုများ၊ဘဏ်လုပ်ငန်းနှင့်အရင်းအနှီးစျေးကွက်၊ကော်ပိုရိတ်နှင့်လာျ၊တရားစွဲဆိုနှင့်အငြင်းပွားမှုဖြေရှင်း၊အိမ်ခြံမြေနှင့်အခွန်ကောက်ခံခြင်း။ အော် သည်တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဥပဒေတွင်ခိုင်မြဲသောနှင့်အတူ၊ခန့်မှန်းခြေအား ၁၆၀၀ ရှေ့နေများအတွက်ခုနစ်။ ကျနော်တို့၏ကျယ်ပြန့်ဥပဒေဝန်ဆောင်မှုမှလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းကျွန်ုပ်တို့၏ကွဲပြားခြားနားဖောက်သည်။ မဟာဗျူဟာ၏ရံုးမ်ားကိုအဓိကကော်ပိုရိတ်ဘဏ္ဍာရေးစင်တာများကမ္ဘာအကစွမ်းဆောင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကို။ သည်၏တစ်ခုဖြစ်သည်အကြီးဆုံးဆုံးနဲ့မြင့်မားမှတ်ယူသည်တဦးတည်းရပ်တန့်ဖြေရှင်းနည်းဉာ၊နည်းပညာနှင့်ဆက်စပ်ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဥပဒေကိုကုမ္ပဏီနှင့်အတူပေါင်းစပ်အပေါ်-မြေပြင်ဉာ၊တရားစွဲဆိုခြင်း၊ကျန်းမာရေးစည်းမျဉ်းစည်းကမ်း၊၊နည်းပညာနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်လေ့အကျင့်စွမ်းဆောင်ရည်များအတွက်ဂျပန်နှင့်။
မုန့်ဖုတ် တို့သည်လည်းတရားဝင်ခြွင်းချက်ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုလည်ပတ်မှုအတွက်ဂျပန်နိုင်ငံနှင့်နိုင်ငံတကာဆယ်စုနှစ်လေးခုများ၊နှင့်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်အသက်အကြီးဆုံးကတည်းက၊၎င်း၏တံခါးရွက်ဖွင့်လှစ်အဖြစ်ဆက်စပ်ရုံးဝန် သာ ၁၉၇၂။ ကျနော်တို့လောလောဆယ်တွင်ကျော်ရှိသည်။ ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီ၏အကျဉ်းချုပ် တက္ကတစ်ဦးဖြစ်သည်ကမ္ဘာ့အပထမတန်းစားဥပဒေကိုကုမ္ပဏီ။ အတွက်လူသိများကျွန်တော်တို့ရဲ့လိမ္မာအလုပ်အတွက်အလွန်ရှုပ်ထွေးပြီးအရေးပါကြောင်းအရေးပါသည့်အပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်၊အကျွန်ုပ်တို့သည်ပူဇော်အမြင့်ဆုံးအဆင့်ဆင့်၏ထူးချွန်နှင့်အနံနှံ့အားလုံးကျွန်ုပ်တို့၏အလေ့အကျင့်နှင့်အထူး။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်အများအပြားစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်သည်။ ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီ၏အကျဉ်းချုပ်ကိုရှေ့နေများအတွက်နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်ရဲ့တိုကျိုရုံးတွေကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်လိုအပ်နှင့်စိန်ခေါ်မှုများအကြောင်းဖောက်သည်များနှင့်ရင်ဆိုင်ရ။ များမှတဆင့်ပေါင်းစပ်၏ အဆိုပါကုမ္ပဏီ၏ရင်းနှီးသောအသိပညာကိုဂျပန်စျေးကွက်နှင့်၎င်း၏ကျယ်ပြန့်ပထဝီအနေရောက်ရှိရေး၊ကုမ္ပဏီအပြည့်အဝထားအစေခံရန်နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်စီးပွားလိုအပ်ချက်များကိုဖောက်သည်များ၏။ ဋဌဘီလ်ဂိတ် ကိုယ်စားပြုဦးဆောင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကော်ပိုရေးရှင်းများ၊တိုးတက်မှုနှင့်အလယ်တန်းစျေးကွက်ကုမ္ပဏီများ၊အရင်းအနှီးဈေးကွက်သူများနှင့်လုပ်ငန်းရှင်တိုင်းအတွက်အဓိကလုပ်ငန်းအုပ်စုအဖြစ်ပြည်သူ့ကဏ္ဍအဖွဲ့အစည်းများ၊ပညာရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၊ပရဟိတအဖွဲ့အစည်းနှင့်လူတစ်ဦးချင်းစီ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အလေ့အကျင့်ဖြစ်ပါတယ် ။ ဆက္ဖတ္ရန္တဦးဖြစ်လာခဲ့သည်အကြီးဆုံးဥပဒေရေးရာဝန်ဆောင်မှုပေးအတွက်ကမ္ဘာ့ ၂၀၀၅ မှတဆင့်တစ်ဦးကုမ္ပဏီနှစ်ခုမပေါင်း၏အဖူးအတိုင်းအတာအတွက်ဥပဒေကဏ္ဍမှာပေါ့။ နေစဉ်ကြီးမားတဲ့အတွက်၊ကုမ္ပဏီနှစ်ခုမပေါင်းမဟာဗျူဟာရိုးရှင်းခဲ့ပါတယ်-ကိုဖန်တီးရန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေကျင့်ထိုက်၏၏စောင့်ရှောက်မှုယူပြီးအရေးအပါဆုံးဥပဒေကြောင်းအရလိုအပ်၏။ မဏ္ဍိုင် ရိဒ် ကိုယ်စားပြုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအထိပုဂ္ဂလိကပိုင်မှ-ကုမ္ပဏီအကြီး၊အများပြည်သူ-ကုန်သွယ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကော်ပိုရေးရှင်းများ။ ကုမ္ပဏီရဲ့သုံးရာရှေ့နေများအကြံပေးဖောက်သည်များအပေါ်ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုအပါအဝင်၊ပူးတွဲလုပ်ဆောင်ခြင်းဝယ်ယူ၊ နှင့်စပ်လုပ်ငန်းများ၊စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း။ အဆောက်အဦမှဆုချီးမြှင့်-အနိုင်ရတဲ့ဘဏ္ဍာရေးနှင့် အလေ့အကျင့်၊ ထွင်ခဲ့သည်အနက်၏ကၽြမ္းက်င္မႈကြောင်းတစ်လျှောက်လုံး၏လယ်ကွက်၏စီးပွားရေးနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဥပဒေ။ အဆိုပါကုမ္ပဏီရှိအသိအမှတ်ပြုထူးချွန်များအတွက်၎င်း၏ဆန်းသစ်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်များအတွက်ဘဏ္ဍာရေး၊အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်အတွက်စီမံကိန်း။ ။။။တစ်ဦးဖြစ်သည်အိုင်ယာလန်၏တရားဥပဒေကိုကုမ္ပဏီများအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုများ၊ဘဏ်လုပ်ငန်းနှင့်အရင်းအနှီးစျေးကွက်၊ကော်ပိုရိတ်နှင့်လာျ၊တရားစွဲဆိုနှင့်အငြင်းပွားမှုဖြေရှင်း၊အိမ်ခြံမြေနှင့်အခွန်ကောက်ခံခြင်း။ အော် သည်တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဥပဒေတွင်ခိုင်မြဲသောနှင့်အတူ၊ခန့်မှန်းခြေအား ၁၆၀၀ ရှေ့နေများအတွက်ခုနစ်။ ကျနော်တို့၏ကျယ်ပြန့်ဥပဒေဝန်ဆောင်မှုမှလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းကျွန်ုပ်တို့၏ကွဲပြားခြားနားဖောက်သည်။ မဟာဗျူဟာ၏ရံုးမ်ားကိုအဓိကကော်ပိုရိတ်ဘဏ္ဍာရေးစင်တာများကမ္ဘာအကစွမ်းဆောင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကို။
ကွာရှင်းအတွက်ဂျပန်နိုင်ငံ ၁။ အမျိုးအစားကွာရှင်းမှု၏လေးမျိုးရှိပါတယ်ကွာရှင်းအတွက်ဂျပန် ２။ ကွာရှင်းခြင်းအားဖြင့်ဖြန်ဖြေအတွက်မိသားစုတရားရုံး၊စီးလျှောက်ထားခြင်းအားဖြင့်အဖြေကိုမိသားစုကတရားရုံး(ဖြစ်ပွားသည့်အတွက်ကွာရှင်းခြင်းအားဖြင့်အပြန်အလှန်သဘောတူရောက်မသွားနိုင်)။ ３။ ကွာရှင်းခြင်းဖြင့်ဆုံးဖြတ်ချက်များ၏မိသားစုများကတရားရုံးအရာ၊ကွာရှင်းခြင်းပြီးစီးခြင်းအားဖြင့်မိသားစုကတရားရုံးဆုံးဖြတ်ချက်အခါကွာရှင်းနိုင်ဖြစ်ဖြင့်ဖြန်ဖြေ။ ４။ ကွာရှင်းခြင်းအားဖြင့်တရားစီရင်မှု၏အခရိုင်တရားရုံး။ လျှင်ကွာရှင်းနိုင်ဖြစ်တည်ထောင်မိသားစုကတရားရုံး၊ထိုအခါလျှောက်လွှာအလုပ်အခရိုင်တရားရုံးများအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခု(အပလီကေးရှင်းများအတွက်ခုံသမာဓိအချက်)။ တစ်ချိန်ကအမှုဆုံးဖြတ်တာဖြစ်ပါတယ်၊အမွားျပဳလက်မှတ်မိတ္တူနှင့်လက်မှတ်များအခြေချဖို့၊အတွဲကွာရှင်း။ ၁။ အမိန့်ကြော်ငြာစာကွာရှင်းခြင်း(၏အမှု၌ကွာရှင်းခြင်းအားဖြင့်သဘောတူစာရွက်စာတမ်းရရှိနိုင်မှာဖြစ်သို့လှည့်ပါတီေဒသအားလံုး)ကိုဆောင်သောလက်မှတ် နှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတံဆိပ်နှစ်အရွယ်ရောက်ပါတယ္။ ၂။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတံဆိပ်၏အစီရင်ခံပုဂ္ဂိုလ်(့)-နိုင်ငံခြားထာင္ဘက္မ်ားကင်းလွတ်လျှင်သူတို့မလုပ်ခဲ့၊အထောင်ဖက်ရဲ့လက်မှတ်အစေခံပါလိမ့်မယ်)။ ၃။ အကယ္ရင်ခံရုံးအရုံး၏အမြဲတမ်းလိပ်စာကိုဂျပန်မိတ်ဖက်၊မိတ္တူသို့မဟုတ်ထုတ်ယူ၏သူသို့မဟုတ်သူမ၏မိသားစု။။။။။ ၄။ ၅။ လက်မှတ်၏လက်ရှိလိပ်စာ ၆။ မိတ္တူလက်ထပ်ထိမ်းမြားလက်မှတ်လျှင်နှစ်ဖက်စလုံးက်င္လည္ေ။ ၇။ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူကလေးမွေးဖွားလက်မှတ်ကိုထည့်သွင်းမဆိုအသေးအဖွဲကလေးကိုစုံတွဲတစ်တွဲရှိတယ်ဆိုရင်နှစ်ဖက်စလုံးက်င္လည္ေ။ လျှင်နှစ်ဖက်စလုံး၌မဖြစ်ဖို့သဘောတူကွာရှင်းခြင်း၊လိုအပ်သည်များကိုလက်ခံရရှိရန်ဖြန်ဖြေပြီးရင်ကိုမိသားစုကတရားရုံး။ ပါကတရားရုံး၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအတွက်မျက်နှာသာအတွက်ကွာရှင်းသင့်တော့တင်ပြစာများ၏မိတ္တူကိုတရားရုံးဏာနှင့်"၏အမိန့်ကြော်ငြာစာကွာရှင်း"သင့်ရဲ့ပင်သာယာရုံး။ အဆိုပါဂျပန်ပြည်တွင်းကုဒ်ဆောင်းပါး ၇၇၀၊ထောက်ပံ့ငါးေသံုးႏွစ္တကွာရှင်းမယ်ဆိုရင်ကွာရှင်းနိုင်ဖြစ်ရောက်ရှိပြန်အလှန်သဘောတူညီချက်:အဟောင်း ရက်၊ကွာရှင်းပြီးနောက်အဟောင်းမခင်ပွန်းရဲ့မိသားစုအပ်ခဲ့သည်။အ။။။။။ ဤအကြောင်းပြချက်များအတွက်နှင့်ဆက်စပ်သောအမျိုးသားအမွေစားအမွေတင်ဆောင်လာသောမိသားစုအပေါ်မည်။ ဒီရက်၊မေရတို့၏ချုပ်နှောင်ကလေးများကြောင့်အမျိုးသမီးများစွာအလုပ်လုပ်ပြီးထောကျပံ့နိုငျသူတို့ရဲ့ကလေးများနှင့်အဟောင်းမိသားစုရဲ့အဖြစ်အမည်စနစ်အဖြစ်အရေးမပါကသည္။ ကြိုတင်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အဘတို့ထိတစ်ဦးတည်း၏ချုပ်နှောင်သူတို့သားသမီးပြီးနောက်၊စစ်အ ။ ဒေါက် ကိုေဥပေဒ၊ပေးကမ်းဖို့အခွင့်အရေးမိခင်များအတွက်ကွာရှင်းမှုပေါင်း။ ဂျပန်ဥပဒေဖြင့်နှောင်မှလည်းကောင်းအမိ၏ဖခင်နှင့်အမနှစ်မျိုးစလုံး။ ပူးတွဲနှောင်တရားမဝင်ဖြစ်ပါသည်။ အပေါ်ကွာရှင်းပုံစံကအခြားလိုင်းကလေးများအတွက်သူနှင့်အတူနေသူတို့အဖေနဲ့တစ်လိုင်းသောသူတို့အဘို့နှင့်အတူနေထိုင်သူတို့၏မိခင်။ အစီ ။ အကြောင်းမှာလေးဆယ်ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ပွားမှု၏၊ရ ၁၉၉၇ စစ်တမ်း၊အဆိုပါဇနီးဟောင်းသို့မဟုတ်ခင်ပွန်းဟောင်းဘူးလက်ခံရရှိဘယ်တော့မှချုပ်နှောင်ကိုမြင်သောသားသမီး။ အတွက်ရှစ်ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ပွားမှု၏အ မိဘခဲ့ဘိြဳင္းမည်သည့်အဆက်အသွယ်နှင့်အတူ သူသို့မဟုတ်သူမ၏။။။။။ မိဘသောသူမရပါဘူးနှောင်ထားပြီနီးပါးမျှအခွင့်အရည်သူတို့ရဲ့ကလေးများနှင့်မကြာခဏကြိမ်ကိုကြည့်ဖို့တတ်နိုင်သည်မိမိတို့၏ကလေးများ။ မရွိပါပြဋ္ဌာန်းချက်များအတွက်ပြည်တွင်းကုဒ်ရည်ညွှန်းရန်အခွင့်အရေး၏မိဘများအမည်ပါဘူးသူတစ်ဦးနှင့်အတူအသက်ရှင်။။။။။ အခါ ခွင့်ပြုဒါဟာမကြာခဏကန့်သတ်တလတခါ။ မိခင် ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းအနိုင်ရတရားရုံးဆုံးဖြတ်ချက်ကိုရည်မှတ်ည့္လ်က္။ အချို့အဟောင်းမယားများနေသည်ဟုသူတို့သူခင်ပွန်းမမြင်ရသူတို့သားသမီး။ ပင်သောအခါတရားရုံးကဆုံးဖြတ်ကြောင်းခင်ပွန်းတွေ့မြင်နိုင်သည်အသားတခါတလအဇနီးဟောင်းနိုင်ဖို့ငြင်းလိုက်လျောနှင့်မဆင်းရဲခံရသောအကျိုးဆက်များအတွက်။အမှုများရှိပါသည်၏သူခင်ပွန်းဖြစ်ခြင်းအမှန်အားဖြင့်တစ်ဦးကိုတရားရုံး၏ဥပဒေကြည့်ဖို့သူတို့ရဲ့ကလေးများဒါပေမယ့်ဖြစ်ခြင်းငြင်းဆိုကြောင်းမှန်အားဖြင့်မိမိတို့အဟောင်းမယားများနှင့်ရှိအနည်းငယ်သောခင်ပွန်းအကြောင်းလုပ်နိုင်တာ။.
ထိုဆီသို့ဦးတည်လူတို့စတင်ပြောင်းလဲဖို့အတန်ငယ်အတွက် ၂၀၀၀ အဖြစ်ထမ်းစတင်တောင်းဆိုမှုဆုလာဘ်များအတွက်အလုပ်သူတို့ပြုသမျှအဘို့မိမိတို့ကုမ္ပဏီ(အင်္ဂလိပ်ဝီသိပ္ပံ၊တီထွင်ပာ)နှင့်ကုမ္ပဏီစတင်သွားပြီးနောက်ပြိုင်ဘက်များအတွက်တရုတ်၊တောင်ကိုရီးယားနှင့်ထိုင်ဝမ်နှင့်အခြားဒေသများအတွက်ကူးသူတို့ရဲ့ဒီဇိုင်းများနှင့်အပေါ်ချိုးဖောက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်င်းတို့၏မူပိုင်ခွင့်။
နေလူတစ်ဦးတစ်ပြည်၏ဂ်ပန္ႏခဲ့သူမနှင့်အတူမွေးဖွားလာသောအဆင့်အတန်း။ လျှောက်လွှာများအတွက်နိုင်ငံသားအဖြစ်လျှောက်လွှာများအတွက် ။ ခံရတဲ့နိုင်ငံသားထားပါ။များစွာသောအခွင့်ထူး။ မဲသာေရြးေကာက္ပြဲထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်ထိုကဲ့သို့သောအခွင့်ထူး။ အသစ်နိုင်ငံသားများမျှော်လင့်ကြသည်တွက်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်။ အမြဲတမ်းနေထိုင်နိုင်အရှုံးမိမိတို့အဆင့်အတန်းဆိုရင်သူတို့အဘို့တိုင်းပြည်ကိုစွန့်ခွာသုံးနှစ်သို့မဟုတ်အရှည်၊နှင့်အပျက်အတွက်၏တစ်ဦးတိုးချဲ့မရှိခြင်း၊ရယူရမည်ပီ။ သို့သော်၊အဖြစ်ဂျပန်ပြည်၊သင်ကန့်သတ်ကြသည်မဟုတ်အချိန်ပမာဏအပေါ်သင်ဖြုန်းနိုင်၏အပြင်ဘက်။ ထို့အပြင်၊ခရီးသွားလာပိုပြီးအဆင်ပြေအဖြစ်နိုင်ငံအများအပြားလိုအပ်ပါဘူးအဇာ၏ဂျပန်နိုင်ငံသားများ။
လိုအပ်တဲ့အနမူနာများ၏တန်ခိုးတော်ကိုရှေ့နေအကျိုးစီးပွား၏အစန်းပွ။ လူပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်အစိုးရရှေ့နေရုံး၏။ အသုံးဝင်သောအချက်အလက်လူတိုင်းအတွက်
လိုအပ်တဲ့အနမူနာများ၏တန်ခိုးတော်ကိုရှေ့နေအကျိုးစီးပွား၏အစန်းပွ။ လူပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်အစိုးရရှေ့နေရုံး၏။'၏အမည်အဖွဲ့အစည်းအတွက်အပြည့်အဝ'အတွက်လူတစ်ဦး၏'အတိုက်နှင့်အပြည့်အဝနာမကိုအမှီ၏ဦးခေါင်း'(အေထြေထြညႊန္ၾကားေရးမႉး၊ဥကၠဌ၊စသည်တို့ကို။) သရုပ်ဆောင်များ၏အခြေခံပေါ်မှာအညာဉ်'၏အမည်အဖွဲ့အစည်းကိုလုံးဝသည်အခွင့်အာဏာဖြင့်'၏တန်ခိုးတော်ကိုရှေ့နေ'(ဖြစ်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်၊ဒါပေမယ့်မလိုအပ်ကူးလက်မှတ်လက်မှုနှင့်မှတ်ပုံတင်ခြင်းသည့်အချက်အလက်)အတွက်ကိုယ်စားပြု'၏အမည်အဖွဲ့အစည်းကိုလုံးဝ'အားလုံးအတွက်အလောင်းတွေ၏အစိုးရရှေ့နေရဲ့ရုံးနှင့်အတူလက်ျာ၏ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ပေးရှင်းလင်းချက်လက်မှတ်ထိုးဘို့အတင်သွင်းလာ၏။ လက်ခံရရှိစာရွက်စာတမ်းများနှင့်တော့အမတ်(တံဆိပ်ခေါင်းများ၏အဖွဲ့အစည်း)'ပို့စ်များ၏ဦးခေါင်း၏အရိုးနှင့်အ 'လက်မှတ်များ၏အခေါင်း။
ဂျပန်နိုင်ငံသားဖြစ်တရားဝင်သတ်မှတ်ထား၏လက်မှခွင့်ပြုသူတွေတွေ့ဆုံကြေနထုိင္ျအားဖြင့် သို ။ နိုင်ငံသားအတွက်အများ၏စီရင်ပိုင်ခွင့်ကိုဝန်ကြီးအဖွဲ့နှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်အုပ်ချုပ်သောနိုင်ငံသားဥပဒေ၏ ၁၉၅၀။ ဂျပန်သည်အတင်းကျပ် ပြည်နယ်ဆန့်ကျင်အဖြစ် ပြည်နယ်၊အဓိပ္ပာယ်ဂုဏ်နိုင်ငံသားအားဖြင့်သွေးနှင့်မ၏တည္ေနရာ။ အတွက်အလေ့အကျင့်၊ဒါကြောင့်အားဖြင့် နှင့်မနွယ်ဖွား။ ဆောင်းပါးနှစ်ခု၏နိုင်ငံသားဆောင်ရွက်ပေးသုံးအခြေရာအတွက်လူတစ်ဦးဖြစ်လာနိုင်ပါသည်ဂျပန်နိုင်ငံတွင်စနစ်တစ်ခုအနောက်တိုင်းနိုင်ငံသားအားဖြင့်ကိုယ်ဝန်မွေးပြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ လျှင်တစ်ကိုယ်ဂ်ဖခင်နှင့်မမာမိခင်ကလေးတစ်ဦးရှိသည်၊မိဘအကြာတွင်လက်ထပ်ထိမ်းမြား၊နှင့်ဂျပန်အဘအသိအမှတ်ပြုကြောင်း ၊ကေလးရယူနိုင်ဂျပန်နိုင်ငံသား၊တိုင်းသူငယ်မ၏အသက်အရွယ်ရောက်ရှိ ၂၀။ ဂျပန်နိုင်ငံသားဥပဒေမှထိရောက်သော ၁၉၈၅ ကြောင်းခဲ့ပြီဆိုရင်မိဘတွေမလက်ထပ်သည့်အချိန်တွင်အမွေးနှင့်အဘမအသိအမှတ် စဉ်ကလေးသူငယ်အခနေဆဲအမိဝမ်း၌၊မဆည်းပူးဂျပန်နိုင်ငံသား။ သို့သော်၊ဂျပန်တရားရုံးချုပ်အုပ်ချုပ်အတွက် ၂၀၀၈ အကြောင်းငြင်းနိုင်ငံသားမှကလေးများထွက်မှာမွေးဖွားအထိမ်းအင္ငံျခားေ မိခင်ဖြစ်မှုတစ်ခု။ ဒီအောက်ဖော်ပြပါ၊အရှေးရိုးစွဲလစ်ဘရယ်ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီနှင့်အခြားသူများ၊အဟုဆို၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုမိစ္ဆာအသိအမှတ်ပြု၏၊ကြံပြုမဖြစ်မနေဆောင်ဓာတုပစ္စည်း။ ဤသည်မိုကရက္တစ္ပါတီ၊အစားဥပဒေကြမ်းကြီးအောင်မြင်ပြီး ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင်ခွင့်ပြုဓာတ်ပုံများကို၏အဘနှင့်ကလေးနှင့်သိပ္ပံနည်းကျစမ်းသပ်ဖို့မေတ္တာရပ်ခံအဖြစ်သက်သေအထောက်အထားသာကိစ္စ၏သံသယ။ ဂျပန်အတွက်လိုအပ်သောလျှောက်ထားသူအရှုံးမပေးဖို့သူတို့ရဲ့လက်ရှိနိုင်ငံသား(များ)ဖြစ်စေမီသို့မဟုတ်ပြီးနောက်မကြာမီအပေါ်မူတည်ပြီး၊နိုင်ငံသား၊အ ရာအရပ်ကိုကြာလျှင်ကိုယ်၏နိုင်ငံသားမဖြစ်ပေါ်ပါဘူး။ ရှိသော်လည်းစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအရပျ၌၊ဂ်ပန္အစိုးရမတင်းကြပ်စွာပြဌာန်းများအတွက်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအ လုပ်ငန်းစဉ်အဖြစ်အတိအကျဖြစ်စဉ်ကိုအသီးအသီးတိကျတဲ့နိုင်ငံသားအပေါ်မူတည်တဲ့ဂျပန်ရဲ့နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးနှင့်သဘောတူညီနှင့်အတူပေးအပ်။ အခြေခံပညာ လိုအပ်ချက်များကိုလည်းကွဲပြားခြားနားလူတစ်ဦးမှမခွဲခြားဘဲ၎င်းတို့၏နိုင်ငံသားနှင့်အပေါ်မူတည်။ လျှောက်ထားသူ၏လက်ရှိအဆင့်အတန်း။ မတူဘဲအများဆုံးအခြားနိုင်ငံများ၊လျှောက်ထားရှိသည်ဖို့ရှိသည်မဟုတ်ခဲ့အမြဲတမ်းနေထိုင်သူဖြစ်ဖို့အခွင့်လျှောက်ထားရန်အတွက်ဂျပန် ။ ထိုဝန်ကြီးများ၏တရားမျှတမှုကိုလျော့စေခြင်းငှါအသက်အရွယ်နှင့်နေအိမ်သို့လိုအပ်ချက်များကိုလျှင်လျှောက်ထားခဲ့တဲ့အထူးဆက်ဆံရေးမှဂျပန်(ဥပမာ၊ဂျပန်မိဘ)။ အသားျဆောင်ရွက်ရန်ထောက်ပံ့သောအစားအစာ၏ဂ်ပန္ႏမေနာက္အႏွစ္ဂျပန်နိုင်ငံသားအားဖြင့်အထူးဓာတ္ပံုကိုသူပေးခဲ့ပြီထူးခြားသောဝန်ဆောင်မှု။ သို့သော်၊ဒီပြဋ္ဌာန်းခဲ့ဖူးငြမ်း။ သူတို့ ရွေးချယ်ရမယ်တရားဝင်အမည်၊အခြားဂျပန်၊ပါဝင်သည်အားလုံးသို့မဟုတ်မည်သည့်အရောနှော၏ပန္ဆုိျခင္း၊အတည်ပြုကန္ဂ်ီ။ တခါတရံလျှောက်ထားပေါ်အကြံဥာဏ်ပေးတော်မူခဲ့သည်ဂျပန်အမည်များ၊ဒါပေမယ့်တစ်ခုရွေးချယ်တဲ့ဂျပန်သံထွန်းအမည်တစ်ခုဘယ်တော့မှမကြီးလိုအပ်ချက်ရှိပါတယ်ဥပမာအားဖြင့်၏သမိုင်းကာက္ၾဂ်ရွေးချယ်ရာတွင်ဥပဒေကြောင်းအမည်များပေါ်လာခဲ့ပါဘူးလူမ်ိဳးဂျပန်။ သို့သော်၊အတွက် ၁၉၈၃ တရားမျှတမှုပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသော၎င်း၏လက်စွဲနှင့်ကေးရှင်းလမ်းညွှန်များနှင့်ဥပမာများကိုပါအသုံးပြုမည်မဟုတ်-ဂျပန်မူလနိုင်ချေ။ အပလီကေးရှင်းများကိုဖန်ဆင်းခံရဖို့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအတွက်အန္ႀကီးဌာန၏တရားဌာနခွဲရုံးနှင့်အတူတာဝန်များအတွက်ထိုမြို့နေရာကိုလျှောက်ထား။ တစ်ဦးစာအုပ်ငယ်မည်ပေးထားဖို့လျှောက်ထားမှာပထမဆုံးရောက်သောကရှင်းပြသည်တိုင်းလိုအပ်သည့်စာရွက်စာတမ်းနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်များအတွက်ရှင်းပြ။ အဆိုပါစာအုပ်ငယ်မှာပေး၏အစအဦးလုပ်ငန်းစဉ်အတိုင်းစာရင်းမှတ်တမ်းတင်ကြောင်းလျှောက်ထားရန်လိုအပ်ကနေသူတို့ရဲ့အိမ်ကိုနိုင်ငံနှင့်မိမိတို့နိုင်ငံ၏သံရုံး၌ဂျပန်။ လျှောက်ထားလိုအပ်ချက်များကိုဟောပြောနိုင်မှဖော်ပြကိုယ်တော်တိုင်မိမိကိုယ်ကိုအတွက်ဂျပန်နှင့်နိုင်မှအဖြေကိုအင်တာဗျူးမေးခွန်းတွေအတွက်ဂျပန်။ တွေ့ဆုံမေးမြန်းကြလိမ့်မည်မေးခွန်းများကိုမေးမြန်းအကြောင်းကိုပုံစံလျှောက်ထားနှင့်ပြည့်စုံကြောင်းအဘယ်ကြောင့်လျှောက်ထားရန်လိုဆည်းပူးဖို့ဂျပန်နိုင်ငံသားအဖြစ်။ အဆုံးမှာရှိစေခြင်းငှါ၊အဖြစ်ရေးသားစမ်းသပ်မှုတစ်မူလတန်းကျောင်းတွင်ဒုတိယတန်းအဆင့်။ ပြီးနောက်အဆိုပါစာရွက်စာတမ်းများကိုစေလွှတ်ကျိုအပြောင်းမှာဝန်ကြီးဌာန တရားမျှတမှုဌာနချုပ်ကနေရှစ်ဆယ်လအတွင်း(သို့မဟုတ်ကြာကြာအပေါ်မူတည်ပြီးလျှောက်ထား)မှပထမဦးဆုံးလျှောက်လွှာ။ လျှောက်ထားမည်ခေါ်အားဖြင့်သူတို့တွေ့ဆုံမေးမြန်းအကြောင်းဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ကြိမ်တွေ့ဆုံမေးမြန်းရရှိသည့်ရလဒ်များကိုမှတိုကျို။ ဂျပန်အမျိုးသားသည်ဟုယူဆရန်ရှိသည်ကြသောသူတို့၏နိုင်ငံသားအပေါ်သို့ အတွက်မည်သည့်နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်။ အောက်မှာအပြန်လှန်ဖန်ဆင်းသောနိုင်ငံသားဥပဒေကို ၁၉၈၅ တွင်ဆောင်းပါးများတဆယ်နှင့်တဆယ်လိုအပ်မည်သည့်အတတ်မျိုးစုံနိုင်ငံသားအလုပ်'၏ရွေးချယ်မှု'အသက်နှစ်ဆယ်နှင့် ၂၂၊အရာအတွက်သူတို့ရွေးချယ်ရန်စွန့်ပယ်ဖြစ်စေသူတို့ရဲ့ဂျပန်နိုင်ငံသားသို့မဟုတ်၎င်းတို့၏နိုင်ငံခြားရေးနိုင်ငံသား(့)။ ဒါလုပ်ဖို့ပျက်ကွက် အန္ႀ၏တရားမျှတမှုကိုတောင်းဆိုပါင္းရွေးချယ်မှု၏မည်သည့်အချိန်တွင်မ။ လျှင်လိုအပ်သောကြေညာမှုကိုမဖန်ဆင်းသည်လအတွင်း၊သူတို့ရဲ့ဂျပန်နိုင်ငံသားအလိုအလျှောက်ခြင်းခံရ။ စွန့်ပစ်နိုင်ငံခြားနိုင်ငံသားအဖြစ်ဖန်ဆင်းခင်ဂျပန်အရာရှိများဖြစ်စေခြင်းငှါထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းအားဖြင့်နိုင်ငံခြားပြည်နယ်ရှိခြင်းအဖြစ်အဘယ်သူမျှမဥပဒေရေးရာ ကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်အတူအမှုဖြစ်သကဲ့သို့၊ဥပမာအားဖြင့်၊အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု။ ဂျပန်နိုင်ငံသားဘယ်သူကိုင်မျိုးစုံနိုင်ငံသားအဖြင့်မွေးဖွားခြင်း၊နှင့်မဆုံးရှုံးဖို့ဆန္ဒရှိသူတို့ဂျပန်နိုင်ငံသားအဖြစ်၊အပ်ဖို့ကြေညာသူတို့ရဲ့အလိုဆန္ဒဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်ဂျပန်နိုင်ငံသားအားဖြင့်အသက် ၂၁။ အစိတ်အပိုင်း၏ဤသည်လိုအပ်ချက်ဖြည့်ဆည်းဖို့'ကြိုးစားအားထုတ်'ဖို့စွန့်ပယ်ခြား တာနဲ့သူတို့ကြေငြာခဲ့ကြ၊သူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်ဂျပန်နိုင်ငံသား။ ဤခက်ခဲစေခြင်းငှါအချို့ကိုဂျပန်နှင့်နိုင်ငံခြားနိုင်ငံသားများအတွက်၊ဥပမာ၊အီရန်နိုင်ငံသားများမစွန့်ပယ်သူတို့ရဲ့အီရန်နိုင်ငံသားအထိအသက်အရွယ် ၂၅။ ဂျပန်အမျိုးသားမဆုံးရှုံးပါဘူး၊သူသို့မဟုတ်သူမ၏နိုင်ငံသားများတဲ့နေရာမျိုးမှာနိုင်ငံသားအဖြစ်ဝယ်ယူထူးခြားသောဖြစ်သောအခါဂျပန်အမျိုးသမီးအိမ်ထောင်သည်အနေနဲ့အီရန်အမျိုးသား။ ဤအမှု၌သူမအလျှောက်ရရှိသည်အီရန်နိုင်ငံသားများနှင့်ခွင့်ပြုထားသည်ဖြစ်အီ-ဂ်ဆာင္တာမ်ားအမျိုးသား၊ဝယ်ယူရရှိမှု၏အင္ငံသားေခဲ့သည်လိုလို။ သော်လည်းဖြစ်ပါတယ်ရှိမရှိအမည်မသိကြောင့်အစဉ်အဆက်ဖြစ်ခဲ့ပြီး၊ နိုင်ငံသားအဖြစ်လည်းဆုံးရှုံးလျှင်လူတစ်ဦးဖြစ်လာသည့်အရပ်ဘက်ဝန်ထမ်းတစ်ဦး၏အစိုးရ၊မိမိတို့အအခန်းကဏ္ဍကိုခံစားခဲ့ရမှဝိရောဓိဖြစ်တစ်ပြည်၏။ နိုဝင်ဘာလအတွက် ၂၀၀၈၊လစ်ဘရယ်ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီအဖွဲ့ဝင်တင်သွင်းသောအဆိုပြုချက်ကိုခွင့်ပြုရန်အနွယ်၏ရောထွေး-အိုင်းတွင်စုံတွဲသောမိဘသည်ဂျပန်ရှိသည်ဖို့တစ်ခုထက်ပို။ အဆိုပြုချက်ကိုလည်းဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများအတွက်နိုင်ငံခြားသားဖြစ်ခွင့်ရရှိရန်ဂျပန်နိုင်ငံသားဆုံးရှုံးသွားမပါဘဲ၎င်းတို့၏မူလ။ ဒါဟာယေဘုယျအားဖြင့်အခက်ခဲရှိသည်ဆာင္တာမ်ားနိုင်ငံသားအဖြစ်ဂျပန်နှင့်အခြားတိုင်းပြည်မှပြဋ္ဌာန်း၏ဆုံးရှုံးမှုများအတွက်ဂျပန်နိုင်ငံသားအခါဂျပန်အမျိုးသား အတွက်အခြားနိုင်ငံ('ကိုယ်၏နိုင်ငံသားအဖြစ်'အထက္)၊နှင့်လိုအပ်ချက်ကိုစွန့်ပယ်တစ်ဦး၏လက်ရှိ ခါ အတွက်ဂျပန်နိုင်ငံ(အထက်)။ ရှိနေဆဲအချို့အရာအတွက်နည်းလမ်းများပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးရှိစေခြင်းငှါဆာင္တာမ်ားနိုင်ငံသားအဖြစ်ဂျပန်နဲ့အခြားနိုင်ငံအပါအဝင်:၂၀၁၈၊ဂျပန်နိုင်ငံသားဖူးဇာ-အခမဲ့သို့မဟုတ်ဗီဇာအပေါ်ဆိုက်ရောက် လက်လှမ်း ၁၈၀ နိုင်ငံများနှင့်နယ်မြေအဆင့်၊ဂျပန်နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ၁ ကမ္ဘာ့ဖလားအတွက်အဆိုအရဗီဇာကန့်သတ်အညွှန်းကိန်း။ ေ၂၀၁၇၊ဂျပန်နိုင်ငံသားအဆင့်နှစ်ဆယ်ကိုးအတွက်နိုင်ငံသားအညွှန်းကိန်း။ ဒီအညွှန်းကိန်းမှကွဲပြားဗီဇာကန့်သတ်အညွှန်းကိန်း၊အပေါ်အလေးပေးသောပြင်ပအကြောင်းအချက်များအပါအဝင်ခရီးသွားလာ။ အ ထည့်သွင်းစဉ်းစားအတွက်၊အပြင်ခရီးသွားလာမှုလွတ်လပ်ခွင့်၊ပြည်တွင်းအကြောင်းရင်းများ၊ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ငြိမ်မှု၊စီးပွားရေးအတန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိ၊နှင့်လူသားဖွံ့ဖြိုးမှုအဖြစ်ကောင်းစွာ။ 'လျှင်ဖခင်သို့မဟုတ်မိခင်နှင့်။ မီတာ။ လက်ရှိတွင်ဂျပန်နိုင်ငံသားသို့မဟုတ်ခဲ့တဲ့ဂျပန်ပြည်မှာသူတို့ရဲ့အချိန်သေမင်း၏၊ဂျပန်နိုင်ငံသားဝယ်ယူနိုင်ပါသည်ဖြင့်ဆက်သွယ်ပြီးဝန်ကြီး၏။ သုံးရုရှားလက်စွဲတွင်အရှေ့ဥရောပနှင့်အာရှရှိ။ အများစုသည်၎င်း၏လူဦးရေ၏(၈၀)ဘဝအတွက်ဥရောပ၊ရုရှား၊ထို့ကြောင့်ရုရှားတစ်ခုလုံးအဖြစ်ထည့်သွင်းအဖြစ်ဥရောပနိုင်ငံကဒီမှာ။ လေးကီလက်စွဲအတွက်အရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့်အရှေ့တောင်ဥရောပ။ အသေးစားအစိတ်အပိုင်း၎င်း၏ပိုင်နက်နယ်မြေ (၃)အရှေ့တောင်ဥရောပဟုခေါ်တာကစ် ။ ငါးဂျန်နှင့်ဂ်ာ္ဂ်ီ(တာင္ရှေ့တောင်)လက်စွဲ။ နှစ်ဦးစလုံးရှိသည်သေးငယ်တဲ့အစိတ်အပိုင်းသူတို့ရဲ့နယ်မြေတွင်ဥရောပ၏အစိတ်အပိုင်းကေး။ ခြောက်ဇက်လက်စွဲ။ အသေးစားအစိတ်အပိုင်း၎င်း၏နယ်မြေများတည်ရှိပြီးအနောက်နိုင်ငံများ၏မူလေနရာအဘိဓါန္မ်ားအားအရှေ့ဥရောပ။ ခုနစ်ယားနှင့်ဆိုက်ပရပ်စ်(မြောက်ပိုင်းဆိုက်)လုံးဝအတွက်အနောက်တောင်ပိုင်းအာရှသို့သော်ရှိခြင်းလူမှုနိုင်ငံရေးကွန်နှင့်အတူ။ ရှစ်ဂုတ္တုလက်စွဲတွင်မြောက်အာဖရိကနှင့်အရှေ့အလယ်ပိုင်း။ အသေးစားအစိတ်အပိုင်း၎င်း၏ပိုင်နက်အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာခေါ်ယား။
ဂျပန်၌၊ရှေ့နေမှာဥပဒေအခြေစိုက်စခန်း၏ဥပဒေကြောင်းအရအသိုင်း။ သမိုင်းကြောင်းအ၊ဂျပန်အကောက်ခွန်အစပြုတစ်ဦး၏ရှောင်ရှားခြင်းဥပဒေ ပါဝင်ပတ်သက်မှု၊အခြေခံအပေါ်သို့တိုးပွားပဿဒ္ဓိနှင့်ဂျပန်အခြေခံမူများ၏ညီညွတ်ဘယ်သူတစ်ဦးဝင်းရှေ့မှာဆောင်ခဲ့များအတွက်ရာဇဝတ်မှုသို့မဟုတ်အရပ်ဘက်အမှုခံစားခဲ့ရများပြည်သူနှင့်ပုဂ္ဂလိကအရှက်ကတည်းက၊သူတို့ကနှောင့်အယှက်ဟ။ သို့သော်ငြားလည်း၊က ၁၈ ရာစု၊ေသတိထားပါစပူဇော်သက္ကာဘို့ရိုးရှင်းပြီးဥပဒေရေးရာဝန်ဆောင်မှုအတွက်ဧည့်သည်များ။ သူတို့ဟာအဖြစ်လူသိများ ။ အားဖြင့်၁၉ရာစု၊ကိုးကားပေါ်လာမှအစပြုခဲ့သည်အတွက်ဂျပန်စာပေ၏အခန်းကဏ္ဍအပေါ်ကို'ဥရောပစတိုင်'ရှေ့နေ။ တရားဝင်အသိအမှတ်ပြုတရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်အတွက်ပြည်တွင်းစမ်းသပ်မှုတွေ၊အဖြစ်လူသိများ ၊ပေါ်လာမှအစပြုခဲ့သည်အားဖြင့် ၁၉ ရာစုအ။ အဘယ်သူမျှမဥပဒေရေးရာသင်တန်းလိုအပ်ခဲ့သည်ခံရဖို့အ ။ ၏စည်းမျဉ်းဥပဒေပညာရှင်များစတင်ခဲ့စဉ်အတွင်းတြင္က်ယ္စြာ။ ၁၈၉၀ ခုနှစ်တွင်၊အဆိုပါရာဇဝတ်ကုတ်ပြင်ဆင်ခဲ့သောအသိအမှတ်ပြုဖို့အခွင့်ဥပဒေကြောင်းအရကိုယ်စားပြုမှုကိုကာလအတွင်းရာဇဝတ်သားတစ်ဦးရုံးတင်စစ်ဆေး။ အစိုးရရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ရုံးတင်စစ်ဆေးမှာပါ၊တစ်ဦးအဖြစ်လူသိများ ၊ပေးခဲ့၏ဂုဏ်သိက္ခာဖြစ်ခြင်းအစိုးရအရာရှိ။ အားဖြင့်အသင်း၊ခြင်းများခွင့်ပြုအသစ်လွင်မှု၏တရားဝင် အဆင့်အတန်းအ ။ အစိုးရကလည်းလိုအပ်၏တည်ထောင်ခြင်းအဘားအသင်းအဖွဲ့အသီးသီးမှာခရိုင်တရားရုံးက ၁၈၉၃၊ရှေ့နေရဲ့ဥပေဒက ၊တရားဝင်ပုံမှန်ဥပဒေအလုပ်အကိုင်အားဖြင့်စံအဖြစ် ၊ရှေ့နေမှာ။ အရှေ့နေသည်လုပ်ရပ် အတွက် ၁၉၄၉ ခုနှစ်၊သောတရားဝင်ချမစ်ရှင်အဖွဲ့များအနေနဲ့ဥပဒေမှာရှေ့နေချုပ်အဖြစ်တည်ထောင်ရန်အခြားလိုအပ်ချက်များအတွက်သူတို့အဘို့အကိုင်။ ဥပဒေအလုပ်အကိုင်အတွက်ဂျပန်နိုင်ငံပါဝင်သည်တရားသူကြီး၊ရှေ့နေများနှင့်ရှေ့နေ။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္တရားမရွေးချယ်လျက်ရှိကနေအတွေ့အကြုံရှိတဲ့ရှေ့နေများ၊ဒါပေမယ့်အစားများမှာရွေးချယ်ထားပြီးနောက်တနှစ်၏မဖြစ်မနေ'ဥပဒေရေးရာလေ့ကျင့်ရေးသုတေသနဌာန'။ ပိုထက်တရာတက္ကသိုလ်တစ်ခုရှိဘွဲ့ကြိုဥပေဒဒြေ၊ဆိုလိုတာကလူအတော်များများကိုလေ့လာဥပဒေမှာဘွဲ့ကြိုအဆင့်ပြီးသွားအလုပ်အတွက်ကုမ္ပဏီအတွက်အခန်းကဏ္ဍအကြောင်းမှမသက်ဆိုင်သောဥပဒေ။ သို့သော်၊ဖြစ်လာမှရှေ့နေတစ်ဦးလိုအပ်သည်ဥပဒေကျောင်းသွားသွားဘားစာမေးပွဲ၊နှင့်ဖြည့်စွက်အ ။ အဖြစ်များ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊၃၅၊၀၃၁ မှတ်ပုံတင်ရှေ့နေဘားတန်းနှင့်အတူအသင်းအတွက်ဂျပန်၊အရာတက်မှ ၂၂၊၀၄၉ ဧပြီလအတွက် ၂၀၀၅။ ကြောင့်ယဉ်ကျေးမှုအစဉ်အလာ၊ဂျပန်များရှိသလောက်အသုံးပြုတရားစွဲရန်နည်းလမ်းအဖြစ်အငြင်းပွားမှုများအနည်ထိုင်။ အတက်နှင့်အတူများ၏မူပိုင်ခွင့်-အငြင်းပွားနှင့်နိုင်ငံတကာပူးတွဲလုပ်ဆောင်ခြင်းဝယ်ယူ၊သို့သော်၊ဂျပန်နှင့်ရင်ဆိုင်နေရသည်အနေများ၏ရှားပါးမှုရှေ့နေများ၊နှင့်အစိုးရကခွင့်ပြုထားပါတယ်တက္ကသိုလ်ပူဇော်ဖို့ဘွဲ့လွန်သင်တန်းများအပေါ်ဥပဒေ၊အမိန့်၌လွယ်ကူရန်ရှားပါးသည်။ ေမာ္လထုတ်လုပ်ရန်ရှေ့နေအစတွင်ထင်ဟပ်ဖင်လန်နိုင်ငံသားများ၏ဥပဒေကြောင်းအရအသိုင်းအဝိုင်း၊ရပ် ၂၅။ အရှေ့နေများစစ်တမ်းကောက်ယူသာရွိခဲ့ဝန်ခံဖို့အတွက်နည်းထက်ငါးနှစ်။ စတင်ပြီးလစာများအတွက်ဂျပန်ရှေ့နေပုံမှန်အားဖြင့်ပတ်ပတ်လည်ဆယ်သန်းယန္း(အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၀၀၊၀၀၀)အတွက်တည်ထောင်ဥပဒေကိုကုမ္ပဏီများ၊ထက်ဝက်ခန့်အဖြစ်အများကြီးအတွက်ဂျပန်ကုမ္ပဏီ။ ခုနှစ်တွင်-အိမ်တော်အကြံပေးနေဆဲအတော်လေးရှားပါး၊အတူသာ ၇၇၀၏၃၂၊၀၀၀ မှတ်ပုံတင် အလုပ်လုပ်အတွက်ကော်ပိုရိတ်ဥပဒေအဖြစ်ဌာန၏ဇန္နဝါရီလ ၂၀၁၃။ ဂ် ရှိသည် ရႊ၏ေငြရံအားဖြင့်အနေကြာသီးသီး တရားမျှတမှုလွတ်လပ်မှု(နေကြာ)နှင့်တရားမျှတမှုနှင့်တန်းတူညီမျှ(ချိန်ခွင်)။ နိုင်ငံခြားရေးဥပဒေကိုကုမ္ပဏီများခွင့်ပြုပြီးငှားရမ်းရန်ဂျပန်ရှေ့နေများ ၂၀၀၅ ခုနှစ်၊နှင့်အချို့ထိုကဲ့သို့သောကုမ္ပဏီထိုကဲ့သို့သောအဖြစ် နှင့်အဖြူရောင်အဖြစ်ရပ်တည်ကြပြီကြီးမားသောဂျပန်ဥပဒေတွင်အလေ့အကျင့်ကိုင်တွယ်ပြည်တွင်းကိစ္စရပ်များအတွက်ပြည်တွင်းဖောက်သည်များ။ အချို့သောနိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီကတည်ဆောက် အလေ့အကျင့်အောက်တွင်ဤစနစ်ဖြစ် နှင့်အရှေ့ဩ၊စ သို့မဟုတ်ဖယ်ရှားပစ်သူတို့ရဲ့ အသင်းနေစဉ်၊အခြားသူများကဲ့သို့ဟားမစ် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ရန်အပေါ်မှီခိုအားလွှဲပြောင်းနှင့်အတူဆက်ဆံရေးကိုအကြီးလေးဥပဒေကိုကုမ္ပဏီထက်နှင့်အတူယှဉ်ပြိုင်အားဖြင့်သူတို့ကိုအလုပ်သမား အတွင်းကုမ္ပဏီ။ အတူအများအပြားနိုင်ငံများ၊ရှေ့နေမှာဥပဒေရှောက်ရန်လိုအပ်သည်အမျိုးသားဘားစာမေးပွဲအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်တစ်နှစ်၏အလုပ္သင္၊ေဆးႏွဥပဒေရေးရာသုတေသနနှင့်သင္တန္းေက်ာင္း၏တရားရုံးချုပ်ဂျပန်နိုင်ငံ၏။ ရှိခဲ့ ၇၂ ဥပဒေကျောင်းအဖြစ်ဇူလိုင်လ၏၂၀၁၃ ဂ်ပန္ႏ။ အတွက်ဥပဒေ ကျောင်းအတွက်ဂျပန်နိုင်ငံခဲ့သိသိသာသာကျဆင်းကနေခန့်မှန်းခြေ ၇၀၊၀၀၀ လျှောက်ထား ၂၀၀၄ ခုနှစ်မှခန့်မှန်းခြေ ၂၀၊၀၀၀ အတွက် ၂၀၁၅။ ဒီကြောင့်အမြင့်ကျူ၊အခက်အခဲများရှာဖွေအလုပ်အကိုင်၊နှင့်အကြို-စာမေးပွဲအဘယ်သူ၏ကျောင်းအပ်ပြီ။။။။။ အမျိုးအစားခံရှေ့နေများကိုမူပိုင်ခွင့်အေးဂျင့်၊အခွန်အေးဂျင့်၊တရား ၊နှင့်စီမံခန့်ခွဲရေး ။ မီ ၂၀၀၆၊ဘားစာမေးပွဲ၏အဆင့်သုံးဆင့်။ ပထမအဆင့်တွင်ကျင်းပခဲ့စေခြင်းငှါ၊ချပ်အခြောက်မျိုးစုံရွေးချယ်မှုမေးခွန်းများကိုနှင့်ပတ်သက်ခခံဥပေဒ၊အရပ်ဘက်ဥပဒေနှင့်ရာဇဝတ်ဥပဒေ။ ဒုတိယအဆင့်၊အခြားနှစ်ရက်ဇူလိုင်လအတွက်၊အချပ်၏အက်ဆေးမေးခွန်းတွေကနှင့်ပတ်သက်။ခခံဥပေဒ၊အရပ်ဘက်ဥပဒေ၊ပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေ၊ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဥပဒေ၊ပြည်တွင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းဥပဒေနှင့်ရာဇဝတ်ဥပဒေလုပ်ထုံးလုပ်နည်း။ နောက်ဆုံးအဆင့်၊ေအာက္တိုဘာ၊တစ်ဦးပါးစပ်စာမေးပွဲနှင့်ပတ်သက်ခခံဥပေဒ၊အရပ်ဘက်ဥပဒေ၊ပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေ၊ပြည်တွင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းဥပဒေနှင့်ရာဇဝတ်ဥပဒေလုပ်ထုံးလုပ်နည်း။ ဗိုလ်လုပွဲရလဒ်များကိုအတွက်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည် နိုဝင်ဘာလလယ်။ ပျမ်းမျှအားဖြင့်တွင်၊၄၀၊၀၀၀-၅၀၊၀၀၀ လူယူ၊ပထမအဆင့် ၇၊၀၀၀-၈၊၀၀၀ အရည်အချင်းပြည့်များအတွက်ဒုတိယအဆင့်နှင့်သာ ၁၊ငါးရာအရည်အချင်းပြည့်များအတွက်ပါးစပ်စာမေးပွဲအသီးအသီး။၂၀၀၆. ခုနှစ်တွင်အသစ်ဘားစာမေးပွဲစပြုခဲ့နှင့်အတူသာအဆင့်နှစ်ဆင့်။ ပထမအဆင့်သည်တစ်နေ့အတို-အဖြေစာမေးပွဲကိုရည်မှတ်အခြောက်ဥပဒေများအဖြစ်အုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။ ဒုတိယအဆင့်အသုံးရက်အက်စာမေးပွဲအရည်အများပြည်သူဥပဒေ၊ပြည်တွင်းဥပဒေနှင့်ပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေ၊အဖြစ်ကောင်းစွာဘာသာရပ်များအဖြစ်နိုငျသောအဖြစ်အပျက်အားဖြင့်အ (အဝင်၊အလုပ်သမားဥပဒေ၊ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာဥပဒေ၊ပြည်သူ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေနှင့်ပုဂ္ဂလိကနိုင်ငံတကာဥပဒေ)။ ထို့အပြင်၊ဥပဒေကျောင်းလိုအပ်ချက်ခဲ့သည်။ အားလံုးဘားစာမေးပွဲပါဝင်ဖြည့်စွက်ရပါမည်တစ်ဦးနှစ်ဦးသို့မဟုတ်သုံးနှစ်ဥပဒေဘွဲ့ရအစီအစဉ်၊နှင့်မှကန့်သတ်ထားပါသည်ယူပြီးစာမေးပွဲအတွင်းငါးနှစ်ဘွဲ့ရပြီးနောက်။ ကြပြီမဟုတ်သူများဥပဒေကျောင်းကိုမှဘွဲ့ရယူစေခြင်းငှါဘားစာမေးပွဲကိုဖြတ်သန်းပြီးနောက်အကြိုခြေစစ်ပွဲစာမေးပွဲ('-')။ ဒါပေမယ့်ဖြတ်သန်း အကြိုစာမေးပွဲအသေးအဖွဲလမ်းကြောင်းနှင့်လူအများစုကဥပဒေကျောင်းကိုမှ။ အတွက် ၂၀၁၅၊အသွားနှုန်းများအတွက်အကြို-စာမေးပွဲခဲ့သည်။ ဒီလမ်းကိုခွင့်ပြု၊ကြိုးခုန်ဖို့ဥပဒေကျောင်းနှင့်ထိုသို့ပေးဆောင်ရှောင်ကြဉ်ပါမြင့်ကျူရှင်။ ဂျပန်ဘားစာမေးပွဲဖြေဆိုတစ်ဦးအဖြစ်လူသိများသည်အခက်ခဲဆုံးစာမေးပွဲအတွက်။ ပေမယ့်ဘားသွားမှုနှုန်းရတဲ့ပိုမိုမြင့်မားပြီးနောက်အဆောက်အအုံဆိုင်ပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ၂၀၀၆၊နှစ်ဆယ်ခန့်သာ၏ဥပဒေကျောင်းကဘွဲ့ရသွား။ ထို့ကြောင့်၊အဆိုပါထိပ်တန်းဥပဒေကျောင်းတွင်ဂျပန်ယှဉ်ပြိုင်ကြသည်နှင့်အတူအသီးအသီးအခြားအားဖြင့်ရရှိပိုမိုမြင့်မားဘားနှုန်းကိုလွန်။ ကျောင်းသားများကိုသာကြိုးစားသွားဘားငါးကြိမ်သောနောက်၊သူတို့အရည်အချင်းပျက်ယွင်း။ ထိ ၂၀၁၃၊သူတို့ကသာကြိုးစားဘားစာမေးပွဲသုံးကြိမ်။ အများဆုံးကျောင်းသားများလေ့လာမှုမှာလွတ်လပ်သောပုဂ္ဂလိကကျောင်းသွားနိုင်ရန်အတွက်ဘားစာမေးပွဲအပြင်၊ဥပဒေကျောင်း။ ပျမ်းမျှအသက်အရွယ်တို့၏ဖြတ်သန်းဘားစာမေးပွဲအ ၂၈-၂၉ အသက်အနှစ်။ အဲဒီအောင်မြင်ပြီးသူဘားစာမေးပွဲပါဝင်တွင်တနှစ်သင်တန်းလုပ်ငန်းစဉ်လေ့လာနေများအတွက်လက်တွေ့ကျွမ်းကျင်မှု(အ ကျွမ်းကျင်မှုကိုအဘို့အတရားသူကြီး၊ရှေ့နေ၊ရှေ့နေ)။ အဆိုပါသင်တန်းမှာအ ရှိရေး(၁)စုပေါင်းသင်တန်း(အတန်းအတွက်စာသင်ခန်း)(၂)လေ့ကျင့်ရေးကွင်း(သံုးႏွစ္တာဖို့တရားသူကြီး၊ရှေ့နေနှင့်ဥပဒေရုံး)။ အပေါ်အလေးပေးသင်ကြားကိုတရားစွဲဆို။ သည့်အခါကျောင်းသားများအတန္းတင္စာေမးပြဲမှာ ၊သူတို့ဖြစ်လာရှေ့နေ၊ရှေ့နေသို့မဟုတ်တရား။ ရှေ့နေနှင့်တရားရွေးချယ်ထားသောအားဖြင့်အ ။ ထို့အပြင်အတွက်ဖြတ်သန်းဘားကိုစာမေးပွဲ၊အရှေ့နေလည်းအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး၏အကူအဘို့အဘယ်မှာဥပဒေရုံးတည်ရှိပါသည်။ အဆိုအရ ၂၀၀၈ ခုနှစ်စစ်တမ်းအားဖြင့်ဂျပန်ရွား၏ဘားအသင်း၊၃၉။ လေးလုံးရှေ့နေများပိုင်အသုံးကျိုဘားအသင်း(တိုကျိုဘားအသင်း၊ပထမကျိုဘားအသင်း၊ဒုတိယကျိုဘားအသင်း)။ အဖြစ်သြဂုတ်လ ၂၀၁၄၊၆၊၃၂၆ အမျိုးသမီးရှေ့နေများအတွက်ဂျပန်ခဲ့ကြကြောင်းဝန်ခံဖို့ဘား၊ပါဝင်သောအကြောင်းရှစ်ယောက်၏ရှေ့နေ။ ခင်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်၊ရှေ့နေ အရည်အချင်းအတွက်နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်နိုင်ပူးပေါင်းဂျပန်ဘားနှင့်အတူအထူးခွင့်ပြုချက်မှတရားရုံးချုပ်။ ဤရွေ့တစ်ဦးချင်းခဲ့ကြသည်အဖြစ်ရည်ညွှန်းခံ၏အဖွဲ့ဝင်များ။ အဘယ်သူမျှမတည်ရှိနေလေ့အကျင့်အတွက်ယနေ့။အမည်ခံအသင်းဥရောပကတရားဝင္ထုတ္ျ.
၁၉၅၅ ခုနှစ်၊နှင့်ဖြင့်အစားထိုးခဲ့သည်ကရှေ့နေမှာနိုင်ငံခြားရေးဥပဒေကိုအဖွဲ့ဝင်အတွက် ၁၉၈၆။ ရှေ့နေများအတွက်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံခဲ့ပြီးဝန်ခံအဖြစ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှေ့နေရှေ့ပန္ ၁၉၇၂ ခုနှစ်တွင်လးအဖြစ်ဂျပန်ရှေ့နေ။ သူတို့လျှို့ဝှက်ခြင်းအားဖြင့်ဂျပန်ရွား၏ဘားအသင်းအဖြစ်'အထူးအဖွဲ့ဝင်များအတွက်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ'၊ကိုးသူတို့ကိုအတွက်နေဆဲအလေ့အကျင့်အဖြစ်သြဂုတ်လ ၂၀၁၄။ ကြီးများဥပဒေကိုကုမ္ပဏီများတိုက်တွင်တိုကျို၊အိုဆာကာနှင့်အခြားမြို့ကြီး၊စိုက်ပျိုးခဲ့ကြသိသိသာသာမကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း။ ၂၀၀၂ ကတည်းကဤဥပဒေကိုကုမ္ပဏီများလည်းပူးပေါင်းအဖွဲ့ဝင်များအဖြစ်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ညာဘက်အတွက်။ သူတို့လျှို့ဝှက်ခြင်းအားဖြင့်အ အဖြစ်ဥပဒေရေးရာအလုပ်အကိုင်ကော်ပိုရေးရှင်းများ၊နှင့်ရှိပါတယ် ၇၇၅ ဥပဒေကိုကုမ္ပဏီပၚမွာဘား၌ဤစွမ်းရည်မြှင့်အဖြစ်သြဂုတ်လ ၂၀၁၄။.
ရရှိရေးအတွက်ချေးငွေဂျပန်နိုင်ဖြစ်ကြိုးစားနေအတွေ့အကြုံပင်အဘို့ဂျပန်ပြည်။ သင်ဆိုရင် မ-ဂျပန်ကို၊ထိုလုပ်ငန်းစဉ်ကပိုပြီးခက်ခဲသည်ဘာသာစကားအတားအဆီးနှင့်ဟတ္လားမှုန်းဖို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်တော်မူနှင့်အတူ(နိုင်ငံခြားသား)။ စဉ်သေချာပေါက်မဖြစ်နိုင်ဘူးမယ်၊သင်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်အယူအပိုအကြောင်းကြိုတင်သင့်ရဲ့စာရွက်စာတမ်းများအတွက်အမိန့်ကိုဆက်လက်မလုပ်ဆောင်မီအချေးငွေလျှောက်လွှာကို။ စုသိမ်းထာက္အစာရွက်စာတမ်းများကြောင်းသက်သေပြပါတယ်အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးတိုင်းပြည်တွင်နေထိုင်ခဲ့၊သင့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဆက်လက်ရှိနေရန်အတွက်ဂျပန်အချိန်ကြာမြင့်စွာများအတွက်(သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးဖို့လုံလောက်တဲ့ရှည်လျားများချေးငွေပြန်ဆပ်)၊နှင့်ဘဏ္ဍာရေးတည်ငြိမ်မှု၏ပုံစံအတွက်တည်ငြိမ်တဲ့အလုပ်အကိုင်များသို့မဟုတ်အလုပ်အဖွဲ့၏သက်သေပြမှာတူညီသောကုမ္ပဏီများအတွက်နှစ်ပေါင်းများစွာ။ ရှိပါတယ်အဘယ်သူမျှမတစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်း၏အစုအဝေးဤစာရွက်စာတမ်းများ၊သင်မူကား၊အသုံးပွုနိုငျဘာမှမပေးဆောင်ဆောင်းပါးတိုတစ်ခုမှရေးထားကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ထံမှသင့်ကုမ္ပဏီအတည်ပြုပြီးအချိန်ရဲ့အရှည်အလုပ်လုပ်ခဲ့ဖူးသည်။ မနေစဉ်သက်သေ၊အထောက်အကူပြုလျှင်သင်အိမ်ထောင်ဖက်သို့မဟုတ်ကလေးသူသည္ဂ်ပန္ႏိုင္ငံဇာတိပြသရန်သင်အကြောင်းပြချက်တစ်ခုရှိသည်ဆက်လက်ရှိနေရန်အတွက်ဂျပန်အချိန်ကြာမြင့်စွာများအတွက်။ ဤ၏အဘယ်သူမျှမအာမခံချက်သင်ရလိမ့်မယ်အရာ၊ဒါပေမယ့်ပို။ ထောက်ခံသောစာရွက်စာတမ်းများရှိသည်သည့်အခါသင်သည်လမ်းလျှောက်အတွက်ကြီးမြတ်သောအခွင့်အလမ်းဖြစ်လိမ့်မည်။ ကောင်းတစ်ခရက်ဒစ်တည်ထောင်နည်း။ ဒီကိုစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိုင်တယ်၊ဒါပေမယ့်အလွန်အထောက်အကူဖြစ်စေ။ သို့သော်၊ဒါကြောင့်အလွန်ခက်ခဲရတဲ့အတွက်ခရက်ဒစ်ကဒ်အတွက်အတိအကျတူညီတဲ့အကြောင်းပြချက်ကခက်ခဲချေးငွေရရှိရန်များ:များ၏မရှိခြင်းအသား-တည်ထောင်ခရက်ဒစ်သမိုင်း။ ဒီနှစ်ဆစံ၊ဒါပေမယ့်ခရက်ဒစ်ကုမ္ပဏီအတွက်ဂျပန်မကြာခဏမှတိုးချဲ့ရန်ချေးငွေပစ္ကမခွဲခြားဘဲအချိန်ပမာဏကိုသင်သုံးစွဲမယ့်တိုင်းပြည်အတွက်။ ဝယ်မှတ်ပုံတင်၊သို့မဟုတ်ရော်ဘာတံဆိပ်ကိုဆောင်သောသင်တို့၏နာမကနေတစ်လိုင်စင်ရ ေျဖေရးဝန္ေဆာင္မႈ။ ဤတံဆိပ်ကိုဘာအတွက်အသုံးပြုမည်သည့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုလိုအပ်လက်မှတ်၊ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်ဘဏ်မှအကောင့်ဖွင့်လှစ်သို့မဟုတ်ချေးငွေလျှောက်ထား။ အမှုသည်လက်မှတ်မစဉ်းစားသည်တရားဝင်သည်ဤအမှုများတွင်၊နှင့်လည်းအနေနဲ့မထား ။ လျှောက်ထားချေးငွေအတွက်အသင့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ရွေးချယ်မှု။ သင်သည်သင်၏ဒေသခံဘဏ်ကိုပုံမှန်အားဖြင့်ပထမဦးဆုံးနှင့်အထင်ရှားဆုံးရွေးချယ်မှုအတွက်ဤလုပ်ငန်းစဉ်၊ဒါပေမယ့်ဖြစ်နိုင်သူတို့အလှည့် သင်ချပြီးကတည်းကမဂျပန်ပြည်။ အခြားနည်းလမ်းရှိပါတယ်နိုင်ငံခြားပိုင်ဘဏ်ဖွင့်ရန်အသုံးပြုင္ငံတကာဖောက်သည်များချီးမွမ်းစေခြင်းငှါအသံုးျပဳရန္သင်၏အကြွေးသမိုင်း၏ဇာတိနိုင်ငံအဖြစ်သက်သေပြ။ ဒီရွေးချယ်မှုသင်တို့ကိုကူညီစေခြင်းငှါအခက်အခဲရှိပါကတည်ထောင်ခရက်ဒစ်အတွင်းဂျပန်။ လည်းရှိပါတယ်လွတ်လပ်သောငွေချေးအဖွဲ့အစည်းအဘယ်သူသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်တော်မူနှင့်အတူမ-ဂျပန်နိုင်ငံသားနေ့တိုင်း၊မိမိတို့အအတိုးနှုန်းများသောအားဖြင့်မြင့်မား။
ကျွန်း၏အစိတ်အပိုင်းကျွန်းစုအောက်မှာရုရှားထိန်းချုပ်မှု၊အမြင်အဖြစ်မှအ ဘာသာျပန္ခ်က္ကၤန္၌၊ ရင္စု။ အင်္ဂါနေ့တွင်၊ခေါင်းဆောင်များ၏ဂျပန်နှင့်ရုရှားဆွေးနွေးပွဲကျင်းပလိမ့်မည်အရာကိုအပေါ်ကျန်ရှိနေတစ်ခုမှာကမ္ဘာပေါ်တွင်အရှည်ကြာဆုံး-အပြေးဖြေရှင်းနိုင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအငြင်းပွားမှုများ။ အဘယ်ကလင့်ခ်ထားလဲ၊အဖြစ်ရည်ညွှန်းတောင်ပိုင်း အားဖြင့်ရုရှားနှင့်မြောက်ပိုင်းနယ်မြေများအားဖြင့်ဂျပန်နိုင်ငံသည်၊ဖမ်းဆီးရမိအားဖြင့်ဆိုဗီယက်တပ်အောက်ဂျပန်ကလက်နက်ချရန်မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့များအတွက် ၁၉၄၅။ ရရှိလာတဲ့အစုသဘောထားကွဲလွဲကျော်ရှိပါတယ်တဲ့သူ။အေၾကာင္းအကျွန်းစုရှိအချဉ်ႏွပံ့ပိုး၊မိမိတို့အအဆက်ရန်ပျက်ကွက်နိမိတ်လက္ခဏာတစ်ခုကိုဒုတိယကမ္ဘာစစ်ငြိမ်းချမ်းရေးစာချုပ်။ ဖွံ့ဖြိုးဆဲဒေသခံဖြေရှင်းနည်းများများအတွက်အတုထောက်လှမ်းရေး၊ နှင့်ကြီးမားသောအချက်အလက်များကိုအားလုံးအပေါ်အစီအစဉ်ကိုအဘို့ဤအသတ္ခံဌာန။ အငြင်းနယ်မြေတည်ရှိ၏ကမ်းကိုဂျပန်ကျွန်းများ၏၊ပါဝင်ပါသည်လေးသီးခြားကျွန်း:၊လူသိများအဖြစ် ၊၊သို့မဟုတ် ၊ နှင့်အ စု ။ ခရီးကြာ၏ဓာတ်ပုံများကိုတစ်ဦး တက်အောင်၏အစိတ်အပိုင်း ကျွန်းမှာကိပ် ၊အချက်အပေါ် ကျွန်းဆွယ်၊ ရင္စု။ အခယူ၏ဓာတ်ပုံများကိုတစ်ဦး တက်အောင်၏အစိတ်အပိုင်း ကျွန်းမှာကိပ် ၊ အချက်အပေါ် ကျွန်းဆွယ်၊ ရင္စု။ အဆိုပါနှစ်ဦးအစိုးရကိုတွန်းအားပေးအတွက်စာချုပ်အရအပေါ်အခြေခံပြီး ၁၉၅၆ ကြေညာသောအသိအမှတ်ချုပ်၏ဒုတိယသတ္မႈဒါပေမယ့်ထွက်ထားသတ်မှတ်သည်တရားဝင်ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူ။ ဂျပန်မီဒီယာကဖော်ပြ၏စည်းကမ်းချက်များကို ၁၉၅၆ ညီမရတာ နှင့်အ ကျွန်းစုကိုဂျပန်၊အထိခိုက်မခံအဆရုရှားနိုင်ငံအအတွင်း၊အဘယ်အရပ် ၏မည်သည့်နယ်မြေကိုဂျပန်မယ်လို့ဖွယ်ရှိအားဖြင့်လည်းတွေ့ဆုံခဲ့သည်။ ထိုနယ်မြေအငြင်းပွားခဲ့ပြီးကြိုတင်ဝန်ကြီးချုပ် ဇိုအာဘေးရဲ့ခရီးစဉ်အမော်ဤအရက်သတ္တပတ်နှင့်ရုရှခေါင်းဆောင်ဗလာဒီမာပူတင်။ သို့သော်၊ဟုတ္ဘဲ၊ရုရှားရဲ့ထိပ်တန်းအမတ္၊ အခွင့်အလမ်းကျွန်း၏ကွင်းဆက်မှပြန်လာ။ အခါမဟုတ္ဘဲနှင့်ဂျပန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ရေးလုပ်ငန်း တွေ့ဆုံခဲ့သည့်အပတ်ကအတွက်မော်စကို၊ရုရှားပြောသူ၏ဂ်ခက္လွဆးတစ္မ်ဳိးကျော်ကျွန်းတစ်ဆုပ်စာရုရှားအမ်ဳိးေယူမော်ရဲ့လမ်းတနင်္ဂနွေ၊တောင်းဆိုမှုများအစိုးရကကုမ္ပဏီရှေ့မှာရပ်အပေါ် ပြဿနာ၊သရဇ္ဈာယ်'(အ) ဖြစ်ကြောင်းရုရှား။ ၊အမှာဆန္ဒပြပွဲခဲ့သောခန့်မှန်းပတ်ပတ်လည်မှာငါးရာလူမျိုးအားကြီးသောအားဖြင့်ထိုမြို့၏လုံခြုံရေးဌာန၊မည်သည့်အကြံပြုချက်ကိုလက်ကျော်အနက်တစ်ဦးလုပ်ရပ်များ။ ဒဏ္ရာေကိုင်အတွက်မော်စကိုတနင်္ဂနွေနေ့မှာ၊တောင်းဆိုမှုများကိုအစိုးရကရပ်တန့်ဆွေးနွေးပွဲအပေါ်အဆင့်အတန်း၏တောင်ပိုင်းကလင့်ခ်ထားလဲ၊ဂျပန်မှာလူသိများအဖြစ်မြောက်ပိုင်းနယ်မြေကိုဂျပန်။ ဒဏ္ရာေကိုင်အတွက်မော်စကိုတနင်္ဂနွေနေ့မှာ၊တောင်းဆိုမှုများကိုအစိုးရကရပ်တန့်ဆွေးနွေးပွဲအပေါ်အဆင့်အတန်း၏တောင်ပိုင်းကလင့်ခ်ထားလဲ၊ဂျပန်မှာလူသိများအဖြစ်မြောက်ပိုင်းနယ်မြေကိုဂျပန်။ အ ဘာသာစကားအသုံးျအောက်ရုရှားတုန်နှင့်အတူအကျိုရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အပေါ်ကျွန်းအုပ်စုရဲ့အဆင့်အတန်း၊နှင့်အတူ ကြောင်းဖော်ပြပီး ၂၀၁၉ ဖြစ်လိမ့်မယ်'အကွေ့အမှတ်'အတွက်အဆုံးအဖြတ်ကျွန်းရဲ့တကယ့်တရားဝင်အဆင့်အတန်း။ အစည်းအဝေးမဟုတ္ဘဲနဲ့ မှတ်သားပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဖြစ်အဆိုပါနှစ်ကတည်းကတွေ့ခဲ့တဲ့ဖြစ်ခြင်းအားဖြင့်အနှစ်နိုင်ငံ'ခေါင်းဆောင်သို့ညှိနှိုင်းအကြောင်း နောက်ပိုင်းလက်မှတ်ထိုး၏ငြိမ်းချမ်းရေးစာချုပ်။ မဟုတ္ဘဲဟုခေါ်သောပြဿနာ၏ကျွန်းရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုအနေနဲ့'ရလဒ်'ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြောင်းရှိ'သိသာထင်ရှားသောကွဲပြားခြားနားမှု'နှစ်ခုအကြားရှိနိုင်ငံများ'ရှုထောင့်၊ဒါပေမယ့်ဖိတ်ခေါ်ပူးတွဲပူးပေါင်းလဲ၊ငွေရတတ်သောငါးဖမ်းရင်းအမြစ်။ ဇိုလည်းတိုက်တွန်းပူးတွဲပူးေ၊ရုရှားရဲ့လႊတ္ေတာ္၊လစ်ဘရယ်ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ၏၊ရုရှားအဖွဲ့ခွဲခေါင်းဆောင်မာ ပြောသင့်ကြောင်းဂျပန်လိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့စ္ႏဆက်ဆံရေး၊သင့်ပယ်ပြီးတပ်ဖွဲ့များမှ၎င်း၏ပိုင်နက်နယ်မြေနှင့်မႈႏႈန္းငြိမ်းချမ်းရေးစာချုပ်ဒါပေမယ့်ရုရှားနှင့်အတူထွက်အုပ်ချုပ်လွှဲပြောင်းအ ။ 'ဘယ်မှာရုရှားအလံဆွဲထားလိမ့်မည်၊ဒါကြောင့်အစဉ်အမြဲဆွဲထား၊သူကပြောပါတယ်၊ထားကြသည်တက် ကိုအကြံပြု'ကမ်းတက်တပ်များ'အပေါ်မြေဆီလွှာ။ 'ထိုအခါကြကုန်မူပူးတွဲစစ်ရေးလေ့ကျင့်။ စေမယ့်ဘယ်အရာကိုမြင်သောဂျပန်ရေတပ်ကိုရုရှားတပ်များမှာ၊ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျနော်တို့အကမ်းတက်တပ်များတဦးအပေါ်ဂျပန်ကျွန်းများ၊သူတို့ကိုဘယ်လိုမြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပါဘူးမြင်စွာမြေယာအပေါ်မြေဆီလွှာ၊ အကြံပြု။ေကျွန်း၍သိမ်းပိုက်ထားသောဥရောပလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များ၏အဆုံးမှာဒုတိယကမ္ဘာစစ်အခါကဲ့သို့အများအပြား ၁၇၊၀၀၀ ဂျပန်နိုင်ငံသားများအရာ။ ပတ်ပတ်လည် ၁၉၊၀၀၀ အခြေချဆင္ေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှအပေါ်နိုင်ငံအဆိုအရဂျပန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန'ဝက်ဘ်ဆိုက်၊'အမွေး၏အစိတ်အပိုင်းနယ်မြေ၏ဂ်ပန္ႏ၊ရာဖူးအားဖြင့်ကျင်းပသည့်နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်။ သို့သော်၊မြောက်ပိုင်းနယ်မြေများခဲ့ကြအောက်တွင်တရားမဝင်အလုပ္အကိုင္အားဖြင့်ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စု၊ပြီးတော့ရုရှား၊ဗီယက်ပြည်ထောင်စုသိမ်းပိုက်သူတို့ကိုအတွက်၁၉၄၅။အရဝန်ကြီးဌာန၊ဂျပန်အစိုးရသည်တက်ကြွခဲ့ပြီးဆက်လက်ညှိနှိုင်းနှင့်အတူရုရှားအပေါ်အခြေခံပြီး၎င်း၏အခြေခံ၏မူဝါဒကိုဖြေရှင်းရန်ကိစ္စကိုမူအလေးမြောက်ပိုင်းကျွန်းနှင့်နိဂုံးငြိမ်းချမ်းရေးစာချုပ်နဲ့အတူရုရှားနိုင်ငံ။.
ယုံကြည်စိတ်ချမှုနှင့်အတူ၊ကျနော်တို့ပြောနိုင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်အတွက်အဲသည်အလျင်အမြန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏စာရွက်စာတမ်းလည်ပတ်မှုစနစ်များအတွက်တည်ထောင်ခြင်း အမ်ိဳးအမှန်။ တချိန်တည်းမှာပင်၊ထိုလုပ်ငန်းစဉ်အကြမ်းရေးဆွဲစာရွက်စာတမ်းများမသာကွဲပြားအများအပြားရှိပါတယ်၊ထိုသို့ဖြစ်လိမ့်မည်ကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်ခက်ခဲသူတို့ကိုတစ်ဦးအတွေ့အကြုံအိမ်ခြံမြေပိုင်ရှင်။ မှန်ကန်သောဖော်ပြချက်များအသိအမှတ်ပြုမှုအမှန်အိမ်ခြံမြေဖြစ်ရမည်ကျမ်းစာနှင့်အညီတည်ထောင်စံ၏။ ဒီအားဖြင့်သတ်မှတ်ထားသည့်ဖြစ်ပါတယ်အ ပြီးသတ်မှတ်ထားတဲ့ဆောင်းပါးနှစ်အရပ္ဘက္အဆိုပါရုရွား။ ဒါဟာသတိပြုသင့်သောအပင်အတွက်ဆိုဗီယက်အကြိမ်၊အခါအမြောက်အများ၏အအိမ်ခြံမြေပိုင်ဆိုင်ဖို့အစိုးရ၊အရပ်ဘက်ဥပဒေတွင်မည်သို့ပင်ပြတစ်ဦးပြောဆိုချက်ကိုများအတွက်အသိအမှတ်ပြုမှုအမှန်၏ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုအဖြစ်လွတ်လပ်သောလမ်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်၏အခွင့်အရေး၏ပိုင်ရှင်၏တစ်ခုဖြစ်သည်။ အမှုအတွက်လိုအပ်မှုအသိအမှတ်ပြုမှု၏အခြင့္အေရးမ်ားအတွက်တရားရုံးကထိုတရားအတွက်ထိုကဲ့သို့သောအမှုသင့်တိုက်ရိုက်အပိုင်ရှင်ကအိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်။ ထိုတရားသူပဳခ်က္ကိုပြောဆိုချက်ကိုများအတွက်အသိအမှတ်ပြုမှုအမှန်၏ပိုင်ဆိုင်မှု၊သက်သေပြရပါမည်အရာကိုအပေါ်အခြေခံသူကပဲေကဤသို့မဟုတ်။ အဖြစ်ကျွမ်းကျင်သူများကဆိုသည်ကား၊အများ၏ပိုင်ထိုက်ထိုကဲ့သို့သောထုတ်ပြန်ချက်များ ပြောဆိုချက်ကို၊သို့မဟုတ်လိုအပ်သောတရားရုံးတည်ထောင်ရန်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအိမ်ခြံမြေပိုင်ဆိုင်ဖို့သူ့ကိုအားဖြင့်။ ရရှိရန်အသိအမှတ်ပြုမှုအမှန်၊အဆိုပါထုတ်ပြန်ကြေညာချက်၏တောင်းဆိုရမည်ဖြစ်ပြီးမှန်ကန်စွာ။ အဆိုပါထုတ်ပြန်ကြေညာချက်အလိုလိုနဲ့စတင်ရပါမည်တစ်ဦးထုပ်သောအမည်တရားနှင့်၎င်းလိပ်စာသတ်မှတ်သည်။ ပြောဆိုချက်ကိုများအတွက်အသိအမှတ်ပြုမှုအမှန်အိမ်ခြံမြေပြင်ဆင်ထားရမည်တစ်ဦးငွေပမာဏအတွက်အကြောင်းလုံလောက်တဲ့အတွက်ပါဝင်ပတ်သက်လူတိုင်းအတွက်အမှုကိစ္စ။ ဒါဟာအစကိုထိုအခါသတိရလျှင်လျှောက်လွှာမဟုတ်ဆွဲပြီးတက်နှင့်အညီတည်ထောင်စံ၊ဒါကြောင့်မဖြစ်စေခြင်းငှါလက်ခံပြီးပေးပို့များအတွက်မူအပါင္ၾ။
စိုးမိုးရေး၏အရေးနှင်ဒဏ်အမိန့်နှင်ဒဏ်နှင့်ဆန္ဒအလျောက်ထွက်ပေါက်ပြည်နှင်ဒဏ်ဖြင့်ကိုယ်ပိုင်ကုန်ကျစရိတ်လျှင်လူဝင္မႈထိန္းဏာကိစ္စများကိုပြည်နှင်ဒဏ်အမိန့်၊အကြပ်ထိန်းချုပ်ရေးအရာရှိရမယ်ချက်ချင်းဖစ္ေစႏိုင္သည္နိုင်ငံခြားသားတွေကိုဖေါ်ပြခြင်းဖြင့်အားဖြင့်အပြည်နှင်ဒဏ်အမိန့်သို့မဟုတ်မိတ္တူပြည်မှပြောနိုင်ငံခြားသား။ အကယ္လူဝင္မႈထိန္းဏာ မနိုင်ကိုချက်ချင်းဖစ္ေစႏိုင္သည္အမျိုးသားပြီးနောက်ထုတ်ပေးရန်အနှင်ဒဏ်အမိန့်မှနိုင်ငံခြားသား၊နိုင်ငံခြားသားကိုဖြစ်လိမ့်မည်သိမ္းမှာလူ၊ဒသလူဝင္မႈကောင်းမွန်ထိန်းသိမ်းရေးစင်တာများ၊သို့မဟုတ်အခြားမည်သည့်တည်နေရာအားဖြင့်သတ်မှတ်ဝန်ကြီး၏တရားမျှတမှုသို့မဟုတ်အကြပ်ကြပ်စစ်ဆေးရေးသူတစ်ဦးဖြစ်ရန်အခွင့်အာဏာအားဖြင့်ဒါလုပ်ဝန်တရားမွ်အထိအာဏာနိုင်ပါလိမ့်မည်ဖစ္ေစႏိုင္သည္နိုင်ငံခြားသားထားပါတယ္။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ပင်လျှင်တစ်ဦးနိုင်ငံခြားအမျိုးသားနှစ်သစ်ကူးအဖြစ်လွှဲအပ်ဖို့နိုင်ငံတော်အ))၊လူဝင္မႈထိန္းဏာမေမ အမျိုးသားအဆိုသည်နိုင်ငံလက်ခံနိုင်ငံခြားသား။ အလင္း၏တရားမျှတမှုကြောင့်တှေ့တဲ့သိသိသာသာအန္တရာယ်ရှိဖို့ဂျပန်ရဲ့အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားသို့မဟုတ်အများပြည်သူလုံခြုံရေးအကြပ်ထိန်းချုပ်ရေးဏာပိုင်မည်မဟုတ် တစ်နိုင်ငံခြားရေးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအဖြစ်သတ်မှတ်အတွက်ဒုက္ခသည်ဆိုင်၊အပိုဒ် ၃၃၊အပိုဒ်(ဒါကြောင့်-ဟုခေါ်၏နိယာမ-)။ အခြား စကားလံုးမ်ား၊အာဏာမည်မဟုတ် နိုင်ငံခြားသားတစ်ဦးမှနိုင်ငံတော်ရှိကြောင်းနယ်မြေအမျိုးသားရဲ့အသက်တာသို့မဟုတ်လွတ်လပ်ခွင့်ကိုခြိမ်းခြောက်မှုကြောင့်သူ့အဖို့သူမရဲ့နိုင်ငံရေးသဘောထား။
ဒေတာများအားလုံးတွင်ပါရှိသော'ဂျပန်ဥပဒေဘာသာပြန်ချက်ဒေတာဘေ့စစနစ်'စေခြင်းငှါလူထုတ်ပုံနှိပျလိုအပ်ပါကအဖြစ်။ ဤတရားမဝင်ပန္ခ်က္မ်ား။ သာမူရင်းဂျပန်ကျမ်း၏ဥပဒေများနှင့်စည်းမျဉ်းများဥပဒေသက်ရောက်မှု၊နှင့်အသုံးပြုခံရဖို့ရှိပါတယ်အဖြစ်တစ်ခုတည်းကိုသာရည်ညွှန်းပစ္စည်းကိုအကူအညီအတွက်နားလည်မှု၏ဥပဒေများနှင့်စည်းမျဉ်းများ။ အစိုးရ၏ဂ်ပန္ႏမများအတွက်တာဝန်ရှိဖြစ်လိမ့်မည်တိကျမှန်ကန်မှုကို၊ယုံကြည်စိတ်ချရမှုသို့မဟုတ်ငွေကြေးအထောက်ပံ့ပစ္စည်းအတွက်ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်၊သို့မဟုတ်မည်သည့်အကျိုးဆက်ရလဒ်မှအသုံးပြုမှုသတင်းအချက်အလက်အတွက်ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်။ အားလုံးရည်ရွယ်ချက်များပြန်ပြီးလျှောက်ထားဥပေဒအမဆိုဥပဒေရေးရာကိစ္စသို့မဟုတ်အငြင်းအခုံ၊အသုံးပြုသူများနှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်မူရင်းဂျပန်ကျမ်းထုတ်ဝေတရားဝင်ပြန်တမ်းအတွက်။
သို့သော်နေစဉ်စိုင်အခဲအစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမဟာဗျူဟာနှင့်ကောင်းတစ်သင်းကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်သင်အားဖြင့်ကိုယ့်အကြောင်းကိုမဆိုစိန်ခေါ်မှုအဖြစ်မှန်ဒေသည်အမြဲတမ်းဖြစ်နိုင်ခြေ။ ဤသည် ဘာကြောင့်အဲဒီလောက်အရေးပါအတည်ပြုချက်၏နောက်ဆုံးအီးဒေဥပေဒထပ္မံျဖည့္စြက္သည္အားဖြင့် ။ ။ ရွီမိုဟာမက်ဘင် သျှ၊ဒုတိယသမ္မတနှင့်ဝန်ကြီးချုပ်၏အယူအေအီးနှင့်အုပ်စိုးသောဒူဘိုင်း။ အဆိုပါဂိုးကိုဖန်တီးရန်ဒေဝါဒမ်ားကြသည်ကိုအကောင်းဆုံးအကြားကမ္ဘာအတွက်၊နောက်ဆုံးတွင်မှမြင့်တက်ပေးအကြီးမြတ်သောအရှင်ဂေ။ ဒါကြောင့်ကြည့်ကြရအောင်အခြေအနေကိုမီဤဥပဒေနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ငါတို့သည်သင်တို့အဖို့မျှော်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်ပြီးနောက်၎င်း၏အကောင်အထည်ဖော်အတွက်အစောပိုင်း ၂၀၁၇။ ယခင်က၊စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်များနှင့်မန်နေဂျာဖြစ်နိုင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်ပျက်ကွက်။ ဤထည့်သွင်းဖြစ်နိုင်ခြေထောင်ထဲ။ ဒါဟာရလဒ်အတွက်များစွာသောလူအမှန်တကယ်အပြေးအယူအေအီးနှင့်ထွက်ခွာအကြွေးနှင့်အကြွေးချေးငွေများ။ ရှိခဲ့တကယ်တော့တော်တော်များများကဆောင်းပါး၏အကြောင်းအတူကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းများ၏အရေးကိစ္စများ အတွက်အီးဒါပေမယ့်သူတို့မှပိုကောင်းသင့်တော်ငယ်ကုမ္ပဏီ။ နှင့်အခြားထက်သိမ်း၊အနည်းငယ်အခြားရွေးစရာများအတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများရင်ဆိုင်နေရဒေ။ ဒီအလှည့်တွင်ဦးဆောင်ရန်ဆင်းရဲရလဒ်များ-အများအတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်၊ ကြွေးရှင်၊နှင့်အထွေထွေအတွက်။ ထိုဥပဒေသစ်အပြောင်းအလဲအခြေအနေ။ ပြီးဖြစ်လာဖို့မျှော်လင့်အအီး၊ပါမစ်ထဲသို့ညင်သာစွာပြုပြင်ပြောင်းလဲပေမယ့်ချေသို့၊အစုံဒေမူဝါဒအကြောင်းပြိုင်ဘက်မည်သည့်နိုင်ငံတကာစနစ်-"မုန္လာဥနီ"ခံရကြောင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဆုံးစွန်သောဆုရှင်။ ဆြဲအားဖြင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့်ရေးဆွဲထံမှအကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်အတွက်ပြင်သစ်၊ဂျာမနီ၊နယ်သာလန်နှင့်ဂျပန်နိုင်ငံ၊စိုးစီးပွားရေးခေါင်းကြီးပိုင်းတွင်အကွေ့နှင့်ကမ္ဘာအနှံ့။ ရည်မှန်းချက်အကူညီနှစ်ဦးစလုံးနှင့်ကြွေးမြီမှကြွလာသောအခါ အခြေအနေများဖန်တီးဖို့ပိုပြီးပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်နှင့်ရွေးမယ်ဆိုရင်အဆိုးဆုံးဖြစ်ပျက်သင့်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ပေးမည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများရင်ဆိုင်နေရခဲယဉ်းကြိမ်အခွင့်အလမ်းပိုကောင်းစတင်ရန်သို့မဟုတ် နှစ်ဦးစလုံးသူတို့၏စစ်ဆင်ရေးနှင့်၎င်းတို့၏အကြွေး။ သူတို့အဘို့အရင်ဆိုင်နေရဒေ(အပေါ်မူတည်ပြီးအချို့သတ်မှတ်)၊ဒါဟာတက်ဖွင့်လှစ်လောင်းကစားခြင်း၏ဘဏ္ဍာရေးတစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးင့္ဖြယ္ဇာတ္လမ္းအခြေချ၊ဘဏ္ဍာရေးဖွဲ့စည်းခြင်း၊သို့မဟုတ်ပျိုးထောင်သစ်၏ရန်ပုံငွေ။ ဥပဒေအမည်ကိုလျှောက်ထားရန် လုပ္ငန္းသံုးကုမၸဏီ(အထက်ချင်းစီ)နှင့်အစဉ်အဆက်ဆက်ကိုကူညီမရှိသွားကုမ္ပဏီမှတဆင့်ငွေကြေးအခက်အခဲရှိပါတယ်တင်းကျပ်သောပြစ်ဒဏ်များအဘို့အရာဌာန၌အလွဲသုံးစားသူများသည်ပညတ်တရား။ ဒါဟာကျယ်ပြန့်ယုံကြည်သောဤပြောင်းလဲမှုဖြစ်စေမည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်အီးတစ်ဦးပင်ပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုအဘို့အဆိုပြုရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေကြသည်ဒေသအခြေခံစခန်းအဖြစ်။ ဒါကြောင့်လည်းမျှော်လင့်မည်ယ့္အမ်ိဳးကိုယုံကြည်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပြီးသားကုန်သွယ်ရေးအတွက်။ ဤသည်ဆက်ဆက်၏အမြင်ကိုအီးဘဏ်များရွားလုပ္ငန္းခန္ဓာကိုယ်အကြောင်းဒီမိုကရေစီအစိုးရကဖြစ်ပျက်ပါစေခြင်းငှါ။ ဟုမပါဘဲဒါဟာဝင်သတိထားစာဖတ်ခြင်း၏ဥပဒေအမည်ရေးလုပ်ငန်းရှင်များအတွက်အတွက်(တစ်ချိန်ကအပြည့်အဝဥပဒေကိုတရားဝင်ထုတ်ဝေလာမည့်ရက်သတ္တပတ်)၊နှင့်ပတ်သက်။၎င်း၏လက်မှတ်အတွက်အထူးသဖြင့်စီးပွားရေးဇုန်အတွက်သူတို့အခြေခံပြီးနေကြတယ်။ အမြဲအဖြစ်၊ဒါကြောင့်အလုံခြုံကိုရှာဖို့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထံမှအကြံဉာဏ်နှင့်အတူသူတို့ကျွမ်းကျင်မှုအတွက်အီးစီးပွားအခင်းအကျင်း။ ဒါပေမယ့်အပေါ်တစ်တာ္ဆိုးတယ္၊ဒီဥပေဒလိမ့်မည်ကြီးမားတဲ့ခြားနားချက်ကိုဖြစ်။ က ဆိုလိုလိမ့်မည်အလားအလာများအတွက်အသက်တာ၏အချို့သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှတဆင့်သွားသူတို့ရဲ့အခက်ခဲဆုံးကာလ၊နှင့်အပြုသဘောအခေါက်-အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မည်ဖြစ်မြှင့်တင်ရန်အတွက်စီးပွားအသစ်အဖြစ်ဥပဒေရေးရာမူဘောင်အဘို့လွယ်ကူစေသည်စတင်ဖို့ဖို့ရွေးချယ်မှအလုပ်လုပ်အီး။ယေဘုယျအားဖြင့်စကားပြော၊ဒေဥပဒေများရှိပါတယ်အဖြစ်နောက်ဆုံးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးများအတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမရနိုငျသောနည်းလမ်းရှာဆပ်ရန်ကြွေး။ဒါဟာအကြွေးသောအများအားဖြင့်ရွေးချယ်လုပ်ဆောင်ဖို့ဒီဥပဒေလမ်းကြောင်းအခါ၊သူတို့အတွေ့အဘယ်သူမျှမကအခြားရွေးချယ်မှု။ ဖွံ့ဖြိုးဆုံးနိုင်ငံများအတွက်၊စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းစနစ်များကိုစီမံခန့်ခွဲ နှင့်ဒေမြင်ကြသည်အဖြစ်လိုအပ်ကြောင်း၊တစ်နည်းအရေးပါသည့်ဆုံးဖြတ်ချက်များကိုအတွက်မကောင်းတဲ့အကြိမ်အကောင်းဆုံးရလဒ်များသည်။ အအီးကကျယ်ပြန့်တန်ဖိုးအတိုင်းအခွန်အခမဲ့၊စူပါစီးပွားတရားစွဲဆိုချာဒါပေမယ့်ခဲ့တင်းကျပ်သောဥပဒေများကိုပတ်ပတ်လည်ဂုဏ်ပြုငွေပေးချေ၏စီးပွားအကြွေးတွေ။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများရန်ကျရောက်နေတဲ့ခဲ့ကြပိတ်ပစ်သို့မဟုတ် မှာပထမဦးဆုံးအရိပ်လက္ခဏာများပျက်ကွက်၊ဖြစ်နိုင်သည်အလုံးစုံတို့ကိုရှေ့တော်၌အဘို့အတွက်ရွေးချယ်စရာများထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်သွားခဲ့ပြီးစနစ်တကျကုန်။ အမူဘောင်များကိုစီမံခန့်ခွဲထိုကဲ့သို့သော ပြဿနာများ၊အများအပြားရှိကြ၏ပိတ်ပြီးအစီးချ၊တင်ပယ်ထမ်းနှင့်အခြေခံအားဖြင့်ရွေးချယ်ရာတွင်ရွေးချယ်စရာများ"ဖြတ်ပြီးပြေး။"ဒါဒေဥပဒေများကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်လူတိုင်းရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်ဒီခက်ခဲတဲ့ကာလကတဆင့်၊တစ်ပြည်နယ်-စီမံခန့်ခွဲရေးစနစ်ကိုသေချာစေရန်တစ်ဖက်တွင်အကြွေးကဲ့သို့သောဝန်ထမ်းသို့မဟုတ်ဘဏ်များငွေပေးချေမှုဂုဏ်၊ဒါပေမယ့်လည်းအစိအစီးဖို့ဘယ်လိုကြောင့်တတ်နိုင်သမျှကြည့်ရှုကောင်းစားသို့မဟုတ်စီမံခန့်ခွဲရာင္းပိုင်ဆိုင်မှုများ၏။ ထိုဥပဒေသစ်အတွက်အီးဖစ္ေကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့အခွင့်အရေးနှစ်ခုစလုံး၏အကြွေးနှင့်အကိုက်တွင်ဤအခြေအနေနှင့် ၏အတိုင်းအတာထက်ဘယ်လိုအခြေအနေစီမံခန့်ခွဲနိုင်ချစ်ကြည်ဘဲစိုးရိမ်မိတယ်မည်သူမဆိုအကျဉ်းထောင်အချိန်သို့မဟုတ်ရုတ်တရက် ။ ကိုကြီးကြပ်ကွပ်ဤမူဝါဒအပြောင်းအသစ်ကိုစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းခန္ဓာကိုယ်ဖန်တီးနေတာကိုခေါ်ကော်မတီ၏ငွေကြေးပြန်လည်ဖွဲ့စည်း။ အ စီမံခန့်ခွဲကြလိမ့်မည်၊မည်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုပြန်လည်ဖွဲ့စည်းလိုအပ်သောအတိုင်းအတာထက်ကျော်လွန်တရားရုံး၏၊နည်းလမ်းငှားရမ်းရန်လယ်ပြင်တွင်ကျွမ်းကျင်သူများ၊ကြီးကြပ်ကွပ်င့္ဖြယ္ဇာတ္လမ္းအခြေချ၊ပြီးဖန်တီးတစ်ဦးဒေတာဘေ့စရှိသည်သောသူတစ်ဦးချင်းဒေ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများဆန့်ကျင်။ ဒေဝါကအမြဲတမ်းပြီးခဲ့သည့်အပန်းဖြေစခန်းနှင့်သာယာသောအလားအလာပေမယ့်အ ရဲ့ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ကြောင်းဆိုလိုလိမ့်မည်ရှိလိမ့်မည်၊အစဉ်အမြဲရန်တိုင်းတာချဉ်းကပ်မှုဤအရေးပါသည့်စိန်ခေါ်မှုများနှင့်အခါကတူအရာအားလုံးသွားပြီဟုအနက်မှားရှိလိမ့်မည်၊နှင့်မကြာမီအိမ်အပေါ်ရွေးချယ်စရာပြဲကိုစီမံခန့်ခွဲဖို့အခြေအနေ။ မရှိခြင်းတွေဖြစ်တဲ့ဥပဒေရှိပါတယ်ယခင်ကအဖြစ်ရှုမြင်ခြင်း"ဆန့်ကျင်ဘက်အတွက်"ဒါမှမဟုတ်ရင်ထိပ်တန်းစီးပွားရေးသံချပ်များ။ အမှန်ကအခုဆြဲအကြီးမားတဲ့သဘောတူ၏အနာဂတ်အတွက်အီး-အပင်အပေါင်းတို့ခြားနားချက်ကိုဖြစ်ကြသည်သောသူတို့အဘို့"စုံစမ်းသွေး-ဒါေပမယ့္-တူရိယာများ"မှကြွလာသောအခါသူကစတင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအတွက်။ အဆိုပါဥပဒေသစ်မည်အမှန်တကယ်အကျိုးအားလုံးတို့အတွက်ပါဝင်ပတ်သက်ဖြစ်နိုင် သို့မဟုတ်ရင်ဆိုင်နေရတစ်ခုကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းကာလ၏ကုန်သွယ်ရေးနှင့်ငွေကြေးစီးဆင်းမှု။ ဒါဟာဆိုလိုယာဥ္တံ(သို့မဟုတ်နှောင့်နှေး)ကိုအပေါ်တတ်နိုင်သမျှအကြွေးကိုပဲပေးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်လိုအပ်သောအသက်ရှူအာကာသနှင့်အချိန်အ သူတို့ရဲ့ကုမ္ပဏီနှင့်၎င်းတို့၏ငွေကြေးကို။ အနှစ်သာရ:တစ်စက္ကန့်အခွင့်အလမ်း။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ရဲ့အမှု ၏ရိုးရှင်းစွာအခွင့်အရေးတစ်ဦးပျက်ကွက်ကုမ္ပဏီ၏လုပ်ငန်းလည်ပတ်၊ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်သိသိသာသာ ကသို့မဟုတ်ရောင်းချခြင်းမှပိုင်ဆိုင်မှုဧရိယာအကြောင်းပျက်ကွက်စဉ်မြှင့်တင်ဧရိယာနှင့်အတူအများဆုံးအလားအလာ။ အတူဂရုတစိုက်စီမံခန့်ခွဲအချိန်နှင့်ဘဏ္ဍာရေး၊ဒါကြောင့်အပင်ဆိုလိုပြန်လာမှတစ်ဦးအနေအထားရှိခြင်း၏အလုပ်လုပ်မြို့တော်။ လျှင်၊စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမှန်တကယ်သည်အသေခံတော့ပိုင်ဆိုင်မှုရောင်းနိုင်ကိုဖုံးလွှမ်းရန်ကြွေးမြီငွေပေးချေမှုဆာက္ရတာတစ်ခုကြာကြာကျော်ကာလအကာကွယ်စောင့်ရှောက်၊အကြွေး'စိတ္ဝင္စားမႈမ်ား။ ဒါကြောင့်အ ၏ပါဝင္ပူးေပါင္းကူညီနိုင်လိမ့်မည်ဟုကုမ္ပဏီတစ်ခုခုကိုထိထိရောက်ရောက်အနီးကပ်နှင့်အတူအနည်းဆုံးပမာဏ၏ဒုက္ခအားလုံးအတွက်ပါဝင်ပတ်သက်၊သို့မဟုတ်စႏိုင္သည္ကုမ္ပဏီမှသူတို့ကိုယ်သူတို့သင်္ချိုင်းမှပြန်လာအဖြစ်လည်ပတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ။ နှင့်အတူကျယ်ပြန့်အများစု၏အယူအေအီး၏စီးပွားရေးဂေထားတက်များအသစ်ဥပဒေသေချာစေရန်ကူညီပေးပါမည်ရုန်းကန်ကုမ္ပဏီတွေကကိရိယာသူတို့ကိုကူညီပေးဖို့အတွက်အဆိုးဆုံးအခြေအနေ။ ထိုသို့ရှိသည်လိမ့်မယ်အကျိုးသက်ရောက်မှုအများအားဘဏ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့အတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့်အတူချေးငွေများနှင့်ကူညီပေးပါမည်၊စိုးရိမ်ပူပန်မှုသက်သာစေနိုင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများယေဘုယျအတွက်။ ဒီသာသာရနိုင်ပါသည်သတင်းကောင်း အဖြစ်ယူအေအီးဆက်လက်ပြုစုပျိုးထောင်ဖို့အမျိုးမျိုး၎င်း၏စီးပွားဖြစ်လာပေါ်မှာလျော့နည်းမှီခို။ အမြန်နှုန်းအတွက်အပြောင်းအလဲအအီးအသက်ရှုခြင်း၊မင့်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်၎င်းမြို့နှင့်အခြေခံအဆောက်အဦအတွက်သာမကစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းမူဘောင်စေသည်အလုပ်လုပ်ကိုင်အောင်မြင်မှုဆီသို့ဦးတည်ပိုလွယ်ကူ၊ပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခု၌ရှိသမျှသောကိရိယာဖြစ်နိုင်လိုအဘို့အသွား။ ဒီနောက်ဆုံးပေါ်ဥပေဒအရပဲနောက်ထပ်မည်သို့ဥပမာအနက်နိုင်ငံအဖြစ်မှကြွလာသောအခါရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆွဲဆောင်ကူညီလုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်နိုင်မဆိုလမ်းအတွက်။ ဖယ်ရှားခြင်းအားဖြင့်အတားအဆီး၏ကွောကျရှံ့၊အဆိုပါဥပဒေသစ်ပေးအနည်းငယ်အန္တရာယ်အကြောင်းမကြာခဏအတွက်ထူးခြားမှုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာအောင်မြင်နှင့်အ ဒါရိုက်တာ'င်းတို့၏ကုမ္ပဏီရှိသည်သောသူအပေါင်းတို့ကိုဆန့်ကျင်-ထွက်။ ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကို၎င်းအထိအအီးရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အောင်ရှိစေရန်နှင့်စီးပွားရေးနှင့်အလုပ်အခွင့်အလမ်းမှတဆင့်ဖြစ်ပျက်သစ်ဥပဒေများအကူအညီေတြကိုပခံုးေပၚမွာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကလူ။ ဒါဟာလူတိုင်းအတွက်ကောင်းပါတယ်။.
အတြင္းသိရွိပ်ံအကူအညီပြောင်းလဲမှုသဘောထားများနှင့်ဥပဒေများ၌ဂ်ပန္ႏနိုင်ရန်အတွက်အာမခံကလေးများအားလုံး၏တိုက်ရိုက်၊အဓိပ္ပါယ်နှင့်ဆက်လက်ဆက်သွယ်နှစ်ဦးစလုံးမိဘတွေနဲ့အတူ၊မခွဲခြားဘဲနိုင်ငံသား၊အိမ်ထောင်ရေးအဆင့်အတန်းဒါမှမဟုတ်ကျား။ ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာကိုပြန်လည်များ၏အခွင့်အတွက်သားသမီးတို့နှင့်အတူဂျပန်ကွဲကွာမိဘ၊ကွာရှင်းခြင်း၊အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိဘပြန်ပေးဆွဲဖို့ဂျပန်၊မိဘပြန်ပေးဆွဲတွင်းဂျပန်နှင့် မွေးထဲကအထိမ်း။ အဆိုပါဂျပန်နိုင်ငံသားသမီးရဲ့အခွင့်အရေးကွန်ရက်၏အကြီးအဂၤလိပ္ဘာသာအခ်က္အလက္မ်ားကိုဂျပန်မိသားစုဥပဒေထောက်ပံ့ပေးသည့်အတွေ့အကြုံဗဟိုပြုချက်အလက်အပေါ်မိဘပြန်ပေးဆွဲ၊ကလေးသူငယ်ချုပ်နှောင်၊နှင့် အခြင့္အေ။ ငါတို့သည်လည်းပေးလက်ခံမှာတရားရုံးကမ္ဘာ့ကျယ်ပြန့်၊ကိရိယာသည်အနည်းငယ်သာဂျပန်မှာလူသိများ။ ငါတို့သည်ယခုရှိသည်အချက်အလက်ရရှိနိုင်သောအတွက်ဂျပန်ဖြစ်နိုင်ကြောင်းတင်ပြဖို့ဂျပန်တရားရုံးမှပညာပေးသူတို့အပေါ်မှာဖြစ်ပေါ်လာသည့်အဘယ်အထွားလာဖြစ်ရပ်ဆန်းဂျပန်၌။ အကြောင်းဖတ်နေတဲ့လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုဆန့်ကျင်တိုက်ပွဲအတွက်ဂျပန်နိုင်ငံနှင့်အတူမြို့၏၊၊လက်ရှိအလုပ်လုပ်နေစဉ်မှာဂျပန်တရားရုံး။ ဂျပန်အိမ်ထောင်ဖက်ရှင်သန်နေသောနိုင်ငံတကာရောက်ကြောင်းသိတယ်ဆိုရင်သူသို့မဟုတ်သူမပာမိမိတို့ကလေးနှင့်အပြေးရဖို့ဂျပန်၊သူတို့မှာအရန်စနစ်ငြင်းပြဋ္ဌာန်းရန်နိုင်ငံခြားတရားရုံးအမိန့်အရရွည္ထိန္းနားတော်မူလိမ့်မည်သူတို့ကိုထိန်းသိမ်းထားတစ်ဦး၏ပြန်ပေးဆွဲ၏။ ဂျပန်ရွား၏ဘားအသင်းတင်သွင်းတဲ့ပြင်းထန်စွာဝေ ၂၁၈ စာမ်က္ႏွာအစီရင္ခံစာကိုကုလသမဂၢကိုရည်မှတ် ဂျပန်အစိုးရရဲ့မလေးအတွက်နှင့်အလုပ်ပေးဖို့အကောင်အထည်ဖော်ဥပဒေများကိုထောက်ပံ့ဖို့စည်းဝေးကြီးအပေါ်လူ့အခွင့်အရေးအရာဂျပန်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်နှင့်အတည်ပြုသည်။ ကျေနပ်ဤစာချုပ်ပါလိုအပ်သည်သိသာထင်ရှားသောအပြောင်းတစ်လျှောက်လုံးဂျပန်နိုင်ငံရဲ့မိသားစုတရားရုံးစနစ်၊ဖြစ်ပေမယ့်၊ကသို့အရများ၏အရေးကိစ္စများ ၊ထိန်းနှင့်ဘက်မဆန့်ကျင်-ဂ်ပန္ဘာသာနှောင်ထုံးများ၊အောက်တွင်ဖော်ပြထားပါသည်။ ကျွန်တော်တိုက်တွန်းချက်များကိုဖတ်ရှုဖို့သင်အားဤမေရိကန်ပြည်ထောင်စုပြည်နယ်ဦးစီးဌာနမှထုတ်ပြန်ချက်။ ဒါဟာဘုံဖြစ်ပါသည်သိပညာတို့တွင်မိသားစုရှေ့နေများသာလျှင်တစ်ဦးကဇနီးနှင့်ခင်ပွန်းခံယူနေကြထောင်ဆွီဒင်(ကတည်းကပူးတွဲထိန်းသိမ်းထားသည်များ၏ပြင်ပတရားမဝင်လက်ထပ်ထိမ်းမြား)၊မိဘမဲ့မေလိုက်ခြင်းဖြင့်အသားမိသားစုနေအိမ်၊နှင့်ဖုံးကွယ်။ အများအပြားရှိပါတယ်။ ဒီမိဘကိုဖုံးကွယ်ထားနိုင်တယ်၊အမြိုးသားအရှည်လျားလုံလောက်တဲ့အပြင်၊ဂျပန်ဥပဒေစနစ်နှင့်မိသားစုတရားရုံးများမကြာဒီ'ထိန်းသိမ်းထားခြင်း'အခြေခံပေါ်မှာကြောင်းအနေအထားဖြစ်လာသည်'တည်ငြိမ်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်အကျွန်ုပ်အတွက်အကောင်းဆုံးအကျိုးစီးပွား၏။ မိသားစုတရားရုံးပင် အားပေးမဒီတုပ္ၿ နေစဉ်ကွာရှင်းသို့မဟုတ်ထိန်းသိမ်းထားမှုအတွက်ဖြစ်ပါသည်၊အရာမကြာခဏနှစ်များစွာကြာ။ တရားရုံးကထိုကိစ္စ၎င်း၏ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်အခြေခံပြီးဒီအသစ်'တည်ငြိမ်ပတ်ဝန်းကျင်'တစ်မိဘ၊အရာတရားရုံးကအကူညီကိုဖန်တီးရန်ပထမဦးဆုံးအရပျ၌။ ထို့ကြောင့်ဂျပန်ကိုထိရောက်စွာ မိဘပြန်ပေးဆွဲ။ ရှင်ပြင်သစ်နိုင်ငံ၏သင်တန်းလိုအပ်သုံးပြီးဂျပန်မိသားစုတရားရုံးစနစ်။ ဒါပေမယ့်သည့်အခါတစ်ဦးတည်းသာမိဘသည္ဂ်ပန္၊မိသားစုတရားရုံးနီးပါးအမြဲဆုနှောင်ထားကြောင်းဂျပန်မိဘ။ ကလေးသူငယ်အခလိုလျှင်စာရင်းသွင်းသည်အပေါ်အချက်။ ဤဥပဒေမကျင့်ပေးတဲ့ဗီဇာမ- နိုင်ငံခြားမိဘနှင့်အတူကလေးများအတွက်ဂျပန်နိုင်အောင်သူတို့မှဆက်လက်တရားဝင်နေထိုင်၊အလုပ်လုပ်။ နိုင်ငံခြားမိဘများသည်ဤသို့အငြင်းအခွင့်အလမ်းကိုအသက်ရှင်ရန်အတွက်တူညီသောနိုင်ငံအဖြစ်သူတို့သားသမီး၊နှင့်မျက်နှာအများအပြားအပိုဆောင်းအတားအဆီးတွေကိုရှာတဲ့အခါ နှင့်အတူ၎င်းတို့၏ကလေးများနှင့်သူသို့မဟုတ်လိုက်ရှာတရားဝင်လုပ်ရပ်တွေအတွက်ဂျပန်။ အဆုံးအန္တရာယ်အကြောင်းဂျပန်မိသားစုတရားရုံးများမပါဝင်လေ့ကျင့် စိတ်ပညာ၊မဟုတ်သလိုသူတို့သည်လုံလောက်စွာစဉ်းစားကလေးသူငယ်အလွဲသုံးမှုဖြင့်ဂျပန်မိဘတွေချတဲ့အခါကလေးကည့္လ်က္။ ဤအလေ့အကျင့်အနိုင်အတားအစော်ဇနီးသို့မဟုတ်စော်ခင်ပွန်းမှရရန်ကြိုးစားနေအကူအညီ၊ထွက်၏ကွောကျရှံ့သောအကြမ်းဖက်ပြေးစေခြင်းငှါပယ်ရှားနှင့်အတူကလေးများနှင့်သူတို့ကိုစောင့်ရှောက်။ ဒီ ၏အစီးအပွါးနှစ်ခုစလုံးကိုဂျပန်နှင့်မ-ဂျပန်ရောနှောမိဘများအတွက်။ ပြီးတာနဲ့ထိန်းသိမ်းထားသည်ချီးမြှင့်ရန်ဂျပန်မိဘ၊သို့မဟုတ်၏အမှု၌လက်မထပ်ရှိရာအနှောင်မှဝင်မိခင်ပုံမှန်အားဖြင့်၊ညီဘက်လိုက်မိသားစုတရားရုံးမှရရှိအပေါ်ဆုံးဖြတ် ။ တရားရုံးအမိန့်ချမှတ်တဲ့နိုင်ငံခြားမိဘရှိပါတယ်၊အပြည့်အဝချုပ်နှောင်တည်ပြုသဖြင့်တရားရုံးချုပ်ဂျပန်နိုင်ငံ၏၊ဒါပေမယ့်မတက်နိုင်ကြောင်းအခြားမိဘပြန်သွားဖို့ကလေးသူငယ်အခနှင့်ချီးမြှင့်ခဲ့သည်တဦးတည်းသာ တစ်နှစ်လျှင်တစ်ခုတည်းသောပြန်လည်ကုဖြစ်ပါတယ်ဖို့အတွက်ပြန်သွားဖို့မိသားစု။ ဒါပေမယ့်တရားရုံးလုပ်ငန်းစဉ်နှစ်အကြာ၊အခုထိဘဲ။ ပင်ပြီးနောက်အရင်။ ဒါကြောင့်သက်ဆိုင်သည့်ဆုံးဖြတ်ချက်၊ဆီႏိုင္းကဂျပန်မိဘနိုင်ထိထိရောက်ရောက်နဲ့အမြဲတမ်းပြန်ပေးဆွဲမိမိတို့ကလေးနှင့် ထိုအခါပယ်ဖြတ်အားလုံးဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်နှင့်အတူအခြားမိဘ။ ဒီအအတော်လေးရိုးရှင်းစွာတရားဝင်မိဘပြန်ပေးဆွဲ။ ဒါဟာအတွက်တိုက်ရိုက်ချိုးဖောက်ဂ်ပန္၏တာဝန်ကိုသေချာစေရန်ပုံမှန် အောက်ရှိနှင့်အခြားဒေသများရှိငြင်းဆိုသူ၏ဇနီးဟောင်းနှင့်အတူမည်သည့်အဆက်အသွယ်မိမိတို့သားသမီးနှစ်ဦးအတွက်မိမိထိန်းသိမ်းထားကတည်းကသူတို့ရဲ့ကွာရှင်းခြင်းအများစုကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း၊အပါအဝင်အပြောင်းအလဲများအပြားမှလက်ရှိအလေ့အကျင့်အတွက်ဂျပန်မိသားစုတရားရုံးစနစ်။ ဒီဝဘ်ဆိုက်အနှံဖို့ကူညီခြင်းတို့ကြောင့်ထိခိုက်ညှိုးငယ်ပြည်နယ်၏သားသမီးရဲ့အခြင့္အေ။ ဒါကြောင့်ကိုထောက်ပံ့ပေးအလမ်းကလေးများအတွက်ရှာတွေ့နှင့်အဆက်အသွယ်ဆုံးရှုံး။ ဒါဟာအစအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်သတိပေးရန်အခြားသူများကအဘယ်သို့သောအကြောင်းဖြစ်ပျက်နိုင်၊နှင့်ပြင်ဆင်ထားရန်မည်သို့နှင့်တိုက်ပွဲပြန်လည်အမှု၌ပါဘူး။ ဒီအတိုင်းတော့၊ဒါကြောင့်ဖြစ်သင့်သည်အဖြစ်ဖတ်ခြင်းအားဖြင့်မည်သူမဆိုအချက်အလက်ပေါ်မှာဤစိုးရိမ်ပူပန်မှုအရေးအများပြည်သူအကျိုးစီးပွား၊များအတွက်ထောက်ပံ့ပညာရေးနှင့်အချက်အလက်များသာရည်ရွယ်ချက်များအတွက်နိုင်ရန်အတွက်မြှင့်ဖို့အများပြည်သူ၏အသိပညာကိုရည်မှတ်ကိစ္စများလက်ဝဲ-နောက်ကွယ်မှ။ မဟုတ်ရင်ညွှန်ပြမဟုတ်လျှင်၊အဆိုပါစာရေးဆရာနှင့်ဘာသာပြန်များ၏ဤဝက်ဆိုက် မရှေ့နေမပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘာသာပြန်၊အတည်ပြုဘာမှမနှင့်အတူအရေးကြီးသင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ရှေ့နေ။ ဆရာကျန်ရစ်မိဘ၊သတိထားပါပြင်သစ်ကျွန်တော်တို့ကိုဆောင်တတ်၏စီမံကိန်းများ၏အစစ်အမှန်မျက်နှာရဲ့နောက်ဂျပန်ရဲ့မိဘ
အရာအားလံုးဒီဝက်ဘ်ဆိုက်အပါအဝင်အဘိဓါန္ဒေသာ၊စာေပ၊ပထဝီဝင်၊နှင့်အခြားကိုးကားချက်အလက်အချက်အလက်ဆိုင်ရာဆက်သွယ်ပေးပါ။ ဒီအချက်စဉ်းစားမဖြစ်သင့်၊ဖြည့်စွက်တက်မှရက်စွဲနှင့်အဖြစ်ဖို့မရည်ရွယ်ဖြစ်ပါတယ်သုံးအရပ်ဌာန၌ခရီး၊အႀကံဉာဏ္ရ၊ဒါမှမဟုတ်အကြံဥာဏ်၏တစ်ဦးဥပဒေကြောင်းအရ၊ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ၊သို့မဟုတ်အခြားပရော်ဖက်ရှင်နယ်၊ အမှုထမ်းကြသည်လည်းကူညီပေးပြီးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ၏အိမ်တော်ရှိပေါလောမျောပါ၊အငါးဖမ်းသူ့လှေ။ အပြား၏ပြတိုက်တည်ဆောက်လျက်ရှိ၏ဘေးထွက်သို့တစ်ဆယ့်ခြောက်ခြေလျင်ပဉ္စဘီးသယ်ဆောင်သောအပြားများအတွက်အမှတ်တရခံရမည်ဖြစ်ပြီးပွင့်လင်းတိုးမြှင့်စာရင်း:အလားအလာဝယ်လက်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်အသံအချက်အလက်အပေါ်စာရင်းနှစ်ဆယ်လေးခုနစ်နှင့်ရောင်းသူအနေဖြင့်အကျိုးရှိ၏အသုံးပြုမှုကိုတိုးမြှင့်ရောင်းအားနည်းပညာအကြောင်းအရာကသူတို့ရဲ့နေအိမ်၏ထိပ်ပေါ်မှာမောင်းနှင်မှုအချိန်ဇယားလိုအပ်သောအောက်ဂြိုဟ်၏အချိန်၊ သိပ္ပံပညာရှင်များအစရှိသည်တို့သွားခြင်းမရှိဘဲအအိပ်နှင့်စားသောက်မှုအပေါ်တွင်အပြေးအဖြစ်သူတို့အလုပ်၏ထိန်းချုပ်မှုနာတာရှည်နာကျင်မှုနှင့်တိုးတက်လာသောအိပ်စက်အတွက်ကြီးမားတဲ့ကျပန်းလေ့လာနှိုင်းယှဉ် ပေးသောတစ်ချိန်ကနေ့စဉ်အ ခန္း(၁)တစ်နေ့နှစ်ကြိမ်နှင့်အတူလူနာအနိမ့်နောက်ကျောနာကျင်မှုကို။ စုံစမ်းစစ်ဆေးတင်ပြဗိုလ်လုပွဲရလဒ်များကိုအများသုံးအုတ်စမ်းသပ်မှု၏အသုံးပြုသည်ရဲ့ (ၿငိမ္း)အမေရိကန်နာကျင်မှုလူ့အဖွဲ့အစည်းအစည်းအဝေးများကိုဒီအပိုဆောင်းဒေတာစင်တာအာကာသင္ေဆယ်မှဤလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးအဖွဲ့အစည်းနှင့်အတူသက်သေရွေးချယ်မှုထိန်းသိမ်းထားခြင်းအဘို့အတစ်-အချိန်စတင်-ကုန်ကျစရိတ်များတက်ပြေးကြလိမ့်မည်ကြောင်းဒေါ်လာ ၂၇၀၊၀၀၀၊အဖုံးများမှူး လေ့ကျင့်ရေးအဘို့အခြောက်ဖြစ်ကြသည်ကိုရန်တာဝန်ပေးသောစခန်းနှစ်ခုတစ်ရက်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်များ၏အရွယ်အဘိဓါန္၊ ရိယာအားလက်ခံတွေ့ဆုံအမှဗီဒီယိုကင္မရာမွတ္တမ္းအသိုက်လှုပ်ရှားမှုငှက်မြတ်နိူးမြင့်တက်နှင့်အတူ'ဂျော့နှင့် ကျော်'ဖရန်စစ္စမစ္အမှကျေးဇူးတင်စကား လာကြသည္အသက်ရှင်သောငှက်ရဲ့မျက်စိအမြင်အ စွန်သိုက်မှကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပွဲကြည့်ပရိသတ်တွေဧဝရက်ထောက်ခံသူများသဖြင့်စားသုံးသူများအတွက်တောက်သောအခြားလမ်းကြောင်းအတွက် စက်မှုလုပ်ငန်းအပေါ်ဝယ်လိုအားအဖြေလိပ်စာစားသုံးသူနယ်ပယ်အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ဖို့အသက်တာ၏အချို့ရလဒ်
အစောပိုင်းကသည်ယနေ့၊ပြီးတစ်ဦးရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဟုန်တည်းပြေးစဉ်းစား၊ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ် ဇိုအောင်မြင်သစ်တစ်ခုအစုလိုက်အပြုံလိုက်င့္ၾဥပေဒအဆင်ပြေ"ဟုခေါ်သည်ဆန့်ကျင်-ဥပဒေကြမ်းပူးပေါင်း။"အဆိုပါဥပဒေသစ်ဖန်တီးစာရင်း ၂၇၇ ပြုမူ၊ဒါကြောင့်တရားမဝင်အစီအစဉ်မဆိုဤပြုမူ။ နှင့်အတူရေနှုန်းတွေ၊သံသယရှိသူမည်သူမဆို၏စီမံကိန္းမဆိုဤပြုမူနိုင်မည်တွင်ထည့်သွင်းအောက်ပစ်မှတ်ထားစောင့်ကြည့်။ ၏သင်တန်း၊ဂျပန်အစိုးရကကတိပြုမ သူတို့ရဲ့မိတ်နှင့်အလေးပေးသောဥပဒေသစ် သာရည်ရွယ်တိုးမြှင့်ဖို့လုံခြုံရေးမီ ၂၀၂၀ အိုလံ။ ဇိုဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း:"ဥပဒေကိုအပြစ်ပေးဖို့အကြမ်းဖက်ဝါဒအဘိတ်ပဲ(ခဲ့)ပြဋ္ဌာန်း။ ကျနော်တို့ချင်ပါတယ်ကဲ့သို့အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ဥပဒေအသင့်လျော်စွာနှင့်ထိရောက်စွာကာကွယ်နိုင်ရန်အတွက်ဘဝအသက်တာနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုကိုဂျပန်လူမျိုးပါ။"အကြားမှတ်ချက်ပြုရာဇဝတ်မှုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့အကြောင်းအပေးအတွက်ဂျပန်နိုင်ငံအောက်နယူးဆန့်ကျင်အကြမ်းဖက်ဝါပညတ်တရားသည်မူပိုင်ခွင့်ချိုးဖောက်သောပြစ်မှုမဟုတ်တဲ့ပြည်တွင်းမိ။ နှစ်ခုစလုံးကိုဂျပန်အကူအညီနှင့်အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့အရေးများဆန့်ကျင်ထွက်အမိန့်ကိုဥပဒေဟုအမည်ပြင်းထန်ရပ်ဘက်လွတ်လပ်ခွင့်အတွက်။ ရေးယောသပ် ကပြောပါတယ်:"ငါသည်သင်တို့ကိုစိုးရိမ်ပူပန်ကြောင့်အအန္တရာယ်များ၏ရာဤဥပဒေအရေအဘယ်သို့သွေး"စီမံ"ထားခြင်းနှင့်ထည့်သွင်းများအ အကွာအဝေး၏အပြစ်ရှိသည့်သည်မှာအကြမ်းဖက်မှုနှင့်ရာဇဝတ်မှု။"ဘီဘီထွက်ချထားအချို့ရယ်စရာအကောင်းဆုံးသောအရာတစ်စုံတစ်ဦးအတွက်ဂျပန် ယခုဖမ်းအလားအလာအကြမ်းဖက်ဝါဒနှင့်သက်ဆိုင်တာဝန်ခံများအတွက်ပင်စီစဉ်သို့မဟုတ်ဆွေးနွေးခြင်းအပေါ်လူမှုမီဒီယာအ:ဖော်ပြထားသည့်အကြောင်းရင်း၏အစိုးရသည်ဤယခု-တရားမဝင်လုပ်ရပ်များ၊ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်ကူးသီခ်င္းည့္ႏိုနေရတဲ့အတွက်မှိုအတွက်သစ်တောထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ရန်ပုံငွေအကြမ်းဖက်လှုပ်ရှားမှုများ။ ထို့ကြောင့်၊စီမံကိန်းသို့မဟုတ်သူတို့ကိုအကြောင်းစဉ်းစားဖြစ်ပါတယ်။ ဤအသံတူအတွေးရဲ၊ဒါကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖြစ်ပါသည်။ ပါမောက္ခ မှဂျပန်ရဲ့ တကၠပြောမြည်:ကမ္ဘာအဝှမ်း၊ထိုကဲ့သို့သောဗြိတိန်နိုင်ငံအတွက်၊ကျွန်တော်တို့အမြင်အခြားနိုင်ငံများယူကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်း၊ကုိယ္ပုိင္ယာဥ္မ်ားအထူးသတိထားဆီသို့ဦးတည်မဲဆန္ဒ'ကိုယ်ရေးအချက်-အားလုံးအောက်ထြားလ်က္ရိွ၏ခေါ်ရန်ရတ္ႏ။ အခါအစိုးရမသင့်ရဲ့သီးသန့်လုံခြုံရေးကာကွယ်ပါ၊သင်ပြုပါရန်ရှိသည်ဒါကြောင့်။ ဤဆောင်းပါးကိုလိုပဲ။ ရတိုင်ကြားအီးမေးလ်ဖြင့်ရှိသောအခါသစ်တစ်ခုဆောင်းပါးသို့မဟုတ်ခါင္ကလက်ခံရရှိရန်နောက်ဆုံးပေါ်သတင်းအဘို့အတိုက်ပွဲတွင်သီးသန့်ကနေတဆင့်အွန်လိုင်းသီးသန့်သတင်းဖတ်ပါ။ အီးခံဳေဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးနှင့်ကိုယ်ရေးအချက်ထောက်ခံယုံကြည်သောသူကျနော်တို့စောင့်ရှောက်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသားတင် အခမဲ့၊လေပိုကောင်းလေမှတဆင့်တိုင္ြ။ အီးဟာ၌ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးစနစ်၏တက္ကသိုလ်ကနေ အဖြစ်တစ်ဦးလူပျိုကြီးရဲ့တက္ကသိုလ်ကနေအများဂျီး။ သူခံစားရသောကမ္ဘာပေါ်တွင်ဆီသို့ဦးတည်ရွေ့လျားပိုကောင်းတဲ့နက်ဖြန်၊ကက ။ အခါပထပါဘူးသင့်ရဲ့သီးသန့်လုံခြုံရေးကာကွယ်ပါ၊လွတ်လပ်မှု၊ဒါမှမဟုတ်သင့်ရဲ့ချမ်းအေးခဲယဉ်းတရားမျှတမှု၊ထိုအခါ၊ဒါကြောင့်အချိန်ဘို့အချိန်ရဲ့။ သို့မဟုတ်အနည်းဆုံး၊တစ်ဦးပြီးပြည့်စုံအလုံးစုံစစ်ဆေးပြုပြင်ဖို့။ ဒီအရူးဖြစ်၏။ အခန့်သည်အထူးဖန်တီးခြင်း။ ဒါပဲ။ လျှင်၊အဘယ်ကြောင့်မဟုတ်၊ငါတို့သည်၊ထိုနိုင်ငံသားများ၊အတင်းအကျပ်ပြုသူတို့ကိုကျွန်ုပ်တို့၏ဆန္ဒကိုသို့မဟုတ်သူတို့ကိုဖယ်ရှားခြင်းဖြင့်အင်အားလိုအပ်ခဲ့လျှင်။ ဤမဟုတ်ဘုရား။ သူတို့ကပိုလိုနတ်ဆိုးဖြစ်ပေမဲ့လူသားများအတွက်ဤမျှလောက်များစွာသောအမှုများ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပညာရေးစနစ်၊အများအပြားနိုင်ငံသားတွေ'ဆင်း'နည်းဖြင့်သိကောင်းစရာများအမြင်ချင်း။အရူး။ဂ်ပန္ႏ။ အဘယ်ကြောင့်။ အ"မာစတာဘွဲ့အတွက်ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေး။"ဘယ်လောက်အကောင့်ဖန်တီး၏ သြင္းအဘို့ဤသည်နေ့ရက်ကာလ။.
အဘယ်အလာတစ်ဦးအဖြစ်အမှုကယ်ဆယ်ရေးစခန်းမှဘူတန်ဂျပန်၌၊အောက်မှာ"ငွေနှင့်လေ့လာသင်ယူ"အစီအစဉ်၊နှင့်၎င်းတို့၏မိဘများ၊အစိုးရကဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်ရှင်းရှင်းချေးငွေပြန်ဆပ်ချိန်အားဖြင့်နှစ်မှလေးနှစ်။ အဆိုပါဆုံးဖြတ်ချက်အဖန်ဆင်းခဲ့သည်နေစဉ်အတွင်းမကြာသေးမီအစည်းအဝေး၊အလုပ်သမားဝန်ကြီး၊ ထုတ်ပြန်ကြေညာသည့်အခါမေးခွန်းတွေကတုံ့ပြန်ရန်မှာအမျိုးသားကောင်မနေ့က။ ဒီအဘူလက်ရှိတွင်ဂျပန်၌အနိုင်ရပ်ဆိုင်းရန်တာဝန်ရှိသည်။ အဲဒီဘွဲ့နှင့်အတူ'ဒီဂရီဘွဲ့ရအလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်းနှင့်လေ့လာဂျပန်အတွက်ဆက်လက်နိုင်ပါတယ်တာဝန်ရှိကျန်ရှိနေသေးသောငွေပမာဏသည်ချေးငွေ၏နှစ်နှစ်ပြီးနောက်နှင့်အတန်း ဘွဲ့ရဆက်လက်နိုင်ပါတယ်ပြီးနောက်လေးနှစ်။ အစီအစဥ္၊ေက်ာင္းသားယူချေးငွေအကြောင်းူ၇၀၀၊၀၀၀ အောက်အရပ်ခြားပညာရေးနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးချေးငွေအစီအစဉ်ကိုလေ့လာသည်နှင့်အတွက်အလုပ်လုပ်။ သူတို့ကပေးအပ် ငါးနှစ်ဆပ်ရန်ချေးငွေနှင့်လည်းမရခြောက်လအတွင်းကျေးဇူးတော်ကာလစတင်ခင်သူတို့ကတာဝန်ရှိချေးငွေ။ ဟုအကြားအခြားရွေးချယ်မှုများထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်ဝှေ့ပယ်ချေးငွေကိုဝှေ့ချွတ်အကျိုးစီးပွား၊ ကိုပြန်ဆပ်ချိန်ဖို့အကောင်းဆုံးအဖြေနှစ်ခုစလုံးအတွက်ကျောင်းသားများနှင့်အစိုးရ။"ဒီလိုလွယ်လွယ်ကူဖိအားအပေါ်ကျောင်းသားများအတွက်ဂျပန်၊"ဟုသူကဆိုသည်။ ထက်ပိုခုနစ်ရာဘူတန်ငယ်သွားသောအားဖြင့်"ငွေနှင့်လေ့လာသင်ယူ"အစီအစဥ္၌ဂ်ပန္ႏ။ ဤလူငယ်အလုပ်လုပ်ရန်ရှိသည်နှင့်အဘို့အဆပ်ကောလိပ်ကျောင်းကျူရှင်နှင့်လည်းချွတ်ဆပ်ချေးငွေအပြင်လူနေမှုကုန်ကျစရိတ်အားဖြင့်အချိန်ပိုင်းအလုပ်အကိုင်များ။ အ မျိုးသားကောင်စီအဖွဲ့ဝင် ထမြောက်ခြင်းပြဿနာရှာရှင်းလင်းချက်မှအစိုးရအဘယ်မျှကာလပတ်လုံးအပေါ်အစိုးရကယူလိုပြဿနာကိုဖြေရှင်းရန်အဘယ်သတ်သတ်မှတ်မှတ်အရေးယူအစိုးရအခဲ့သည်။ လည်းမေးသည်ဝန်ကြီးအရာကိုအပေါ်အစိုးရလုပ်နေတဲ့အပေါ်ဗီဇာကိစ္စရပ်များနှင့်ပတ်သက် ၈၀ နေသောကျောင်းသားများအတွက်လောလောဆယ်တွင်။ င်းတို့၏ဗီဇာသက်တမ်းကြာ။ အခြားနှစ် အုပ်စု၏ေက်ာင္းသား မှထွက်ခွာရန်အဘို့အ။"ကြားပြီးနောက်မကြာသေးမီကအဓိကအစား၊ထိုသူအချို့ပြောင်းလဲကျ၊ဒါပေမယ့်အပြန်ရဖို့သူတို့ရဲ့မူရင်းစာရွက်စာတမ်းများသူတို့ပေးဆောင်ဖို့တောင်းဆိုနေကြပါတယ်ူ၂၅၊၀၀၀၊"သူမကပြောပါတယ်။ ဖွဲ့ဝင် ကဆက်ပြောသည်မဟုတ်ခဲ့ကြောင်းကောင်းတစ်ဦးလမ်းကြောင်းသစ်အကိုင်မူရင်းစာရွက်စာတမ်းများနှင့်သြင္းပိုက်ဆံသူတို့ကိုပြန်ရသည့်အခါကျောင်းသားများအလိုကနေဆုတ်ခွာ။"အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာနအစီအစဉ်မှဆက်လက်အဆိုပါကိစ္စလိုအပ်ချက်များကိုဆွေးနွေးခြင်းနှင့်အတူသက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်အတွက်ဂျပန်နိုင်ငံ၊"ဟုသူကဆိုသည်။ အစိုးရမကြာသေးဆုံးဖြတ်ခဲ့ပေးပို့ဖို့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့၏အရာရှိများစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်အတွက်ပြဿနာ။ ကြားအိမ်အကြောင်းဖြစ်သော်လည်းထိုရက်စွဲသည်မဟုတ်အတည်ပြု၊အဖွဲ့တွေ့ဆုံမည်သောကျောင်းသားများနှင့်မေးမြန်းလျှင်သူတို့ပြန်လာချင်တယ်သို့မဟုတ်ဆက်လက်အလုပ်လုပ်ရှိပါတယ်။ သူလည်းမျှဝေသောကြာပြီးနောက်မကြာသေးမီကကိစ္စအတွက်ဂျပန်၊အဘူအကိုင်အရပ္ျခားဂ်ပန္နုိင္ငံကကိုးကြိမ်လေ့လာရန်အခြေအနေ။ ဘူမယူမ-ဥစ္စာအမြောက်ရေနံ (ဓာတ်ငွေ့)နေသော်လည်းမလုံလောက်မှုဥစ္စာဖြန့်ဖြူး။
အယူခံကိုဂ်ပန္ကစားသမား၊တရုတ်-ဖွံ့ဖြိုးပြီးစမတ်ဖုန်းဂိမ်းတွေတိုင်းကနိဗ္ဗာန်ရွှေခေတ်ခရီးအသစ်ဇာတ်ကောင်အနုပညာ။ အဆိုအရအဆိုပါဂိမ်းရဲ့တရားဝင်တွစ်တာ၊အနုပညာဖြစ်သွားပြောင်းထွက်များအတွက်ဒီဇိုင်းများအများအားဖြင့်ဂျပန်ရုပ်ဖော်အဖြစ်လူသိများဒိန်ခဲဒယ်အိုး(ဒိန်ခဲပေါင်မုန့်)။ လေးဆယ်ဇာတ်ကောင်ရှိပြီးသားအသစ်ပါ။ ဂိမ်းရဲ့တရားဝင်ဆိုက်သောအနေဆဲရှိပါတယ်ဇာတ်ကောင်များပါသေးသူရ ဒါကြောင့်ယူလိမ့်မည်အနည်းငယ်ကြာကြာအကူးအပြောင်းမှသူတို့အားလုံးကိုထွက်။ စိတ်ဝင်စားစရာ၊တချို့ကစားသမားတွေအတွက်ဂျပန်စောကအပြောင်းအလဲနှင့်သူတို့နှစ်သက်မူရင်းအနုပညာ။ အဆိုအရအဆိုပါဂိမ်းရဲ့တရားဝင်တွစ်တာ၊ကစားသမားကိုရွေးနိုင်လိမ့်မည်အကြားနှစ်ဦးစလုံးနှင့်အနုပညာစတိုင်များ။
သငျသညျဆိုပါကကျွန်တော်တို့ကိုတောင်းဆိုလျှောက်ထားရန်အပီပါမစ္ေျမအဖြစ်တစ်ချိန်တည်းမှာလက်ခံရရှိအဆိုပါခွင့်ပြုချက်၏။ အဖိုးအထက်ပါသက်ဆိုင်များအတွက်စံ။ အခကြေးငွေ၏ဥပဒေရေးရာလုပ်ငန်းစဉ်၏ဝန်ဆောင်မှုအပေါ်မူတည်။ အချို့ကိစ္စများတွင်၊အခကြေးငွေလာမြင့်မားအထက်အထက်၊နှင့်အခြားဖြစ်ရပ်များအတွက်၊ကြေးဖြစ်လာထက်နိမ့်တဦးတည်းထက်။ ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခန့်မှန်းကြေးဥပဒေရေးရာဝန်ဆောင်မှုဆွေးနွေးပြီးနောက်စတင်မီသည္။ သာမာန်အားဖြင့်၊ဗီဇာသို့မဟုတ်အရည်အချင်းပြည့်မီနိုင်လတစ်လအတွက်အ ၃ လျှင်လူအပေါင်းတို့သည်လိုအပ်ချက်များကိုလိုအပ်သဖြင့်အစုိးလုံးဝတွေ့ဆုံခဲ့သည်။ဒါပေမယ့်အားချင်ပါတယ်လျှင်သင်ကတစ်ဦးရရှိဇာတတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးသကဲ့သို့၊သင်တို့အဘို့အမှထွက်ခွာရန်ဤအမှုကိုလူဝင္မႈရှေ့နေ။.
ကြောင့်အလျင်အမြန်ကြီးထွားမှု၏အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းထောက်ခံမှု၊တိုးမြှင့်ရန်အပေါက်လုပ်ငန်းရှင်များအမေးသော်ဘယ်လိုဖွင့်ရန်တစ်ဦးကလက်ရှိအကောင့်ကိုအဘို့တစ်ဦးချင်းစီလုပ်ငန်းရှင်။ အချို့အလုပ်မှကြိုက်တတ်တဲ့ပြုပါဒါကြောင့်မပါဘဲ၊ဒါပေမယ့်ကြောင်းသတိပြုမိဖြစ်အချို့သောအခြေမပါဘဲကွန်ပျူတာရိုးရှင်းစွာအမပွုနိုငျ၊ဥပမာအားဖြင့်၊သည့်အခါအဖွဲ့နှင့်အတူတရားဝင်အဖွဲ့အစည်းသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်လုပ်ငန်းရှင်သူလုပ်ဆောင်တွက်ချက်မှုအတွက်သာမဟုတ်-ငွေသား။ အသုံးပြုခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများဒါဟာမပြည့်စုံတဲ့ဝိဘယ်အကျိုးကျေးဇူးများရရှိမည် လျှင်သင်ပွင့်လင်းအကောင့်တစ်ခုများအတွက်ထို့။ ဒါဟာသတိရဖို့အရေးကြီးသောအဓိကအခန်းကဏ္ဍကစားဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာအားဖြင့်နှင့်အတူဘဏ်မှအရာထဲသို့ဝင်တစ်ဝန်ဆောင်မှုကန်ထရိုက်၊တကယ်တော့ဒါဟာအပေါ်မူတည်၏ရှေ့မှောက်တွင်သို့မဟုတ်မရှိခြင်းအချို့။ ဒါဟာသတိပြုသင့်ကြောင်းဖွင့်တစ်ဦးကလက်ရှိအကောင့်ကိုအဘို့တစ်ဦးချင်းစီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၊သင်ကြားအခွန်အာဏာပိုင်များ(သက်ဆိုင်ရွေးချယ်ထားဘဏ်)။ မျသို့သော်၊အတူအပေါငျးတို့အကျိုးခံစားခွင့်ကိုကွန်ပျူတာရှိလည်းအားနည်းချက်များ(မ-ငွေပေးချေမှုကိုအခွန်များသို့မဟုတ်အခြားငွေပေးချေမှုနှောင့်နှေး)။ ဆိုတဲ့အချက်ကိုဥပဒေအခွင့်အ ကိုဆိုင်းအားလုံးစစ်ဆင်ရေးတစ်ဦးချင်းစီ၏အရှင်၊ထိုသို့အလွန်ကံဆိုးဖြစ်သည်၊လျှင်သင်ဆပ်ဖို့လိုပါတယ်။ အစောပိုင်းကဖော်ပြခဲ့တဲ့အဖြစ်၊အဆိုပါဘဏ်သည်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍ၊သင်ပွင့်လင်းအကောင့်အတွက်လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးချင်းစီ။ ဒါကြောင့်အကြောင်းပြောရအောင်ဘယ်စံသတ်မှတ်ချက်လိုအပ်သည်ရွေးချယ်ဖို့ဘာကိုအဘို့အကြည့်ဖို့အတွက်စာချုပ်နှင့်အတူဘဏ်မှ:၁။ ယုံကြည်စိတ်ချရ။ သူမသည်အစဉ်အမြဲကစားအဓိကသော့ချက်တစ်ခုအခန်းကဏ္ဍ(သာအတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကဏ္ဍ)။ အဓိကအ စံအတွက်အထက်ပါအချက်သည်အရှည်နေဖို့အတွက်စျေးကွက်။ အဟောင်းဘဏ်၊အနည်းအခွင့်အလမ်းများဆုံးရှုံးသွား၏ပိုက်ဆံအတွက်အကြိမ်အကျပ်အတည်းဖြစ်နေလိမ့်မယ်။ ၂။ ဖြတစ်ဦးကလက်ရှိအကောင့်ကိုအဘို့တစ်ဦးချင်းစီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၊သေချာအောင်သင်ပေးတဲ့ဝန်ဆောင်မှု၏အင်တာနက်ဘဏ်လုပ်ငန်းနှင့်အပိုဆောင်း။ အချို့အခမဲ့ဖြစ်ပါသည်၊အခြားသူတစ်ဦးကိုတလအတွက်သင်အားသွင်းပါလိမ့်မယ်။ ၃။ မေးမြန်းသင့်ရဲ့အနာဂတ်မိတ်ဖက်နှင့်အတူ၊အချို့သောဘဏ်များသူတို့အလုပ်လုပ်။ ဒီလိမ့်မည်မသာအကြောင်းကိုသင်ယူ၊သူတို့ရဲ့ဂုဏ်သတင်း၊ဒါပေမယ့်လည်းပြပါလိမ့်မယ်နှင့်အတူအဘယ်သူသင်ရင်ကောင်းစတင်ပူးပေါင်းပေါ်ပိုက်ဆံကယ်ဖို့အမျက်နှာျဖစ္ပါသည္။ ၄။ နှိုင်းယှဉ်ဝန်ဆောင်မှုများ၏ကုန်ကျစရိတ်အတွက်အသီးအသီးဘဏ်များ၏။ မကြာခဏအချို့အခကြေးငွေနှင့်အပိုဆောင်းအခကြေးငွေမဟုတ်ဟုထင်ထင်၊ဒါကြောင့်ဂရုတစိုက်လေ့လာမှုကိုစာချုပ်။ ၅။ လျှင်သင့်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုနှင့်ဆက်စပ်သောဖြစ်ပါတယ်နှင့်အတူမကြာခဏတိုက်ရိုက်လွှဲပြောင်းတိုင်းပြည်အနှံ့၊ကြိုးစားပြီးတော့ဘယ်လိုထွက်ရှာဖို့ကြီးမားသောဌာနခွဲများ၏ကွန်ယက်များပါမည္။ ဒါဟာတတ်နိုင်သလောက်သတင်းအချက်အလက်လက်ခံရရှိပြီးနောက်အခြေချအတွက်အကောင့်အပေါ်ကိုလိမ့်မည်။ အတွေ့အကြုံ ရှင်မှာအဖွင့်နောက်ထပ်ကွန်ပျူတာထဲကယူသွားတတ်၏မသာကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလေ့လာမှု၏အထက်ပါဝိသေသလက္ခဏာများပန်း၊ဒါပေမယ့်လည်းရေတွက်ဘယ်လောက်ကုန်ကျငွေကိုစီမံခန့်ခွဲမှုန်ဆောင်မှုအတွက်အနှစ်။ ယနေ့အချိန်တွင်၊စျေးနှုန်းရှာတွေ့နိုင်ပါသည်ခေါ်ဆိုခြင်းဖြင့်အကူအညီစားပွဲခုံ၏အဘဏ်သို့မဟုတ်တဆင့်ကြည့်ရှုဝန်ဆောင်မှုစာချုပ်အွန်လိုင်း။ ဖြတစ်ဦးကလက်ရှိအကောင့်ကိုအဘို့တစ်ဦးချင်းစီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၊ဒီအချက်တစ်ခါတစ်ရံအဓိကသော့ချက်တစ်ခုအခန်းကဏ္ဍသောကြောင့်၊ဒါကြောင့်အပေါ်မူတည် သည်မည်မျှပိုက်ဆံကယ်တင်မည်တစ်ခုလုံးကိုကျော်ကာလများအတွက်လှုပ်ရှားမှု။
ဖျော်ဖြေရေးနောက်ဆုံးမှာပျောက်ဤကိစ္စတွင်အတွက်။ သို့သော်၊ဒါဟာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စလူသိရှင်အခြင့္အေ။ အမျိုးသမီးမဂ္ဂဇင်းဆောင်တစ်ဦးအကြောင်းဆောင်းပါးမှာဆောင်းပါးအစားအသောက်အသုံးပြုပုံကိုပန်းရောင်။ ကတည်းကအ ရယူမပြုခဲ့အကြံပေးသည်ပန်းရောင်သမ္မတကတော်၏အသုံးပြုမှုအတွက်သူတို့ရဲ့ဓာတ်ပုံတွေ၊ပန်းရောင်သမ္မတကတရားစွဲ။ တရားရုံးချုပ်ဘဲဆုပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက်အသုံးပြုမှုများ၏ရုပ်ပုံများအကြောင်းပြချက်များအတွက်သူတို့ တယ္။ သို့သော်၊ဒီပထမဦးဆုံးအမှုအရာအတွက်တရားရုံးချုပ်အသိအမှတ်ပြု ခွင့်အရေးဖျော်ဖြေရေး။
စာဖတ်သူတွေ၏ဇ-ဂ်စေခြင်းငှါတန်ဖိုးကိုနောက်ဆုံးပေါ်သယံဇာတအတင်အခမ်း။ ဒါဟာ လွယ္မ်ားႏွင့္ ရဲ့ဗီဒီယို 'ခရစ်စမတ်အတွက်ဂျပန်နိုင်ငံ:ဇေးနှိုင်းယှဉ်ဒေသခံ'နှင့်ပူးတွဲပါဆောင်းပါး။ ထုတ်လုပ် ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင်၊အဆိုပါလေ့လာမှုကမ်းလှမ်းနေဆဲတန်ဖိုးရှိကြည့်မှာတင်းမာမှုတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ပြန့်ပွားနှင့်လိုက်လျောညီထွေငါတို့၏ဖျော်ဖြေပွဲများအအားလပ်ရက်အတွက်အကြီးအကျယ်မ-။
၂၀၁၀ ဂျပန်ရဲ့လစ်ဘရယ်ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီစတင်မိတ်ဆက်ကလေး-ပြုစုပျိုးထောင်ထောက်ခံမှု။"ဤငွေပေးချေမှုအစားထိုးယခင်ကလေးအထောက်အပံ့စနစ်နှင့်ထားရန်ရည်ရွယ်ခဲ့ကြသည်တိုက်ခိုက်ရေးနိုင်ငံ၏အနိမ့်တာက္အေရာင္သည္အောင်နေဖြင့်ပိုမိုလွယ်ကူများအတွက်မိသားစုများမှသားသမီးအတွက်။ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အကြီးအကျယ်ပြန်လည်တည်ဆောက်စရိတ်ပြီးနောက်မတ်လ ၁၁၊၂၀၁၁ ဆူနာမီငလျင်လှုပ်ခြင်း၊ဂျပန်နိုင်ငံအစိုးရအပြင်ဆင်ထားအ ဥပေဒနှောင်းပိုင်းတွင် ၂၀၁၁၊ပြောင်းလဲနေတဲ့ငွေပေးချေမှုပမာဏနှင့်အရည်အချင်းပြည့်မီလိုအပ်ချက်များကို။ အထွေထွေအတွက်၊မိဘများသို့မဟုတ်အုပ်ထိန်းသူများ၊နိုင်ငံခြားသို့မဟုတ်ဂျပန်၊လူနေမှုနှင့်အတူသူတို့သားသမီးအတွက်။ မိဘနှင့်အတူအမြင့်မားဆုံးဝင်ငွေကိုလျှောက်ထားသင့်ပါတယ်။ သူမိဘများအတွက်နေထိုင်နေကြသည်မဟုတ်နှင့်အတူသူတို့သားသမီးမိဘမပုံမှန်အသက်ရှင်နေထိုင်ဂျပန်နိုင်ငံတွင်မိဘများ၏သားသမီးမဟုတ်ကြဘူးသောသူ၌အသက်ရှင်ဂ်ပန္ႏ(အမီးႏိုင္ငံျခားယာယီ)မိဘများနေသောမစာရင်းသွင်းများအတွက်အမျိုးသားရေးသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီကျန်းမာရေးအာမခံသို့မဟုတ်ပင်စင်အစီအစဉ်နိုင်ငံခြားမိဘတွေအတွက်ဂျပန်အပေါ်ရေတိုနေထိုင်(ခ)ဇာအောက်တွင်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသောဥပဒေ၊ဇွန်လ ၂၀၁၂ အတူမိသားစုများဝင်ငွေ ကျော် ၉။ ခြောက်သန်းယန္းပဳႏိုင္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ သို့သော်လျှင်ပင်သင်ဝင်ငွေထက်ပို။၉။ ခြောက်သန်း၊သင်ဆဲလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါငွေပေးချေမှုလက်ခံရရန်အဘို့အနည်းငယ်ပိုလ ၂၀၁၂။ မှအောက်တိုဘာ ၁၊၂၀၁၁:¥၁၅၀၀၀ တစ်လချင်းစီအတွက်အောက်မှကလေးသုံး¥၁၀၀၀၀ တစ်လအတွက်ပထမဦးဆုံးနှစ်ဦးသားသမီးသုံးယောက်သို့မဟုတ်အသက်ကြီးသူအစမသတ်ပါပြီမူလတန်းကျောင်း¥၁၅၀၀၀ တစ်လအတွက်တတိယသို့မဟုတ်အကြာတွင်ကလေးအတွက်အသက်အရွယ်ကွာအဝေး¥၁၀၀၀၀ အလုပ္အငယ်တန်းအထက်တန်းကျောင်းသားလျှောက်လွှာပုံစံ(ရရှိနိုင်မှာအစိုးရရုံး) သို့မဟုတ်အခြားအထောက်အထား၊သင့်ဘဏ်အကောင့်အချက်အလက်
မနိုင်လျှင်ဖြေရှင်းရန်အငြင်းပွားနှင့်ငွေပါဝင်ပတ်သက်နေသည်၊သင်ရှိသည်ရွေးချယ်မှု၏သေးငယ်တဲ့တောင်းဆိုမှုများသို့မဟုတ် ။ ဤသည်အများပြည်သူတရားဝင်ဖိုရမ်အတွက်ဖြေရှင်းပြောင်အရပ်ဘက်ရား၊သဘာကျော်အားဖြင့်အစီရင်သို့သော်ဂျူ။ သင်ပွင့်လင်းအသေးစား-တောင်းဆိုမှုများ အရေးယူအားထုတ္ရာ၏ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်အဆို၊အရာအတွက်သင်အကျဉ်းချုံးထား၏ဆန့်ကျင်မှုတည္တဲ့။ စောင့်ရှောက်အချို့သောအခြေခံစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအတွက်စိတ်ကိုပြင်ဆင်နေသည့်အခါဤအရေးကြီးသောစာရွက်စာတမ်း။ ရတစ်ဦးကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပြောဆိုချက်ကိုသည့်ပုံစံဖြင့်ဖြစ်စေ၊ချမှတ်လာရောက်လည်ပတ်ခြင်းအားဖြင့်ဒေသခံ သို့မဟုတ်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲပုံစံကနေတရားရုံးရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်။ ဤပုံစံသည္နေရာများနှင့်လိုင်းများအားလုံးအတွက်သတင်းအချက်အလက်လိုအပ်ရန်ဥပဒေကိုဖိုင်ကိုအဆိုကြသည်။ အချို့တရားရုံးများပေး ပုံစံများ၊အရာသင်ပြီးပြည့်စုံသောအွန်လိုင်းပြီးတော့ပုံနှိပ်။ ဤသည်သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်၊ဒါကြောင့်သဘာဝအဆိုကိုရှင်းလင်းပြသားသောမနှင့်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းအသိနှင့်တရား။ အမည်လျော်သောတရား။ သင်ပေးရမည်အပြည့်အဝဥပဒေရေးရာအမည်ကို၏အခြားပါတီနှင့်အတူတိကျသောနှင့်မှန်ကန်သောစာလုံးပေါင်း၊အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်သူမ၏လိပ်စာနှင့်ဖုန်းနံပါတ်လျှင်၊သူတို့ကိုသင်ရှိသည်။ သင်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်လက်မှတ်ထိုးတောင်းဆိုဆန့်ကျင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုပေးရမည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမည်အဖြစ်နှင့်အတူမှတ်ပုံတင်ထား။ ခပ်သိမ်းသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအောက်မှာအမည်ထက်အခြား၎င်း၏ပိုင်ရှင်က၎င်း၏မှတ်ပုံတင်ထားရမယ်'မည်ဝှက်၊နှင့်ဤအချက်အလက်သင့်စက်ကနေအွန်လိုင်းရရှိနိုင်ပါသည်အ ပြည်နယ်အေဂျင်သို့မဟုတ်တရားရုံးစောင့်ရှောက်ကြောင်းဤကိုဖြစ်ပါတယ်။ ပေးထားသောအာကာသအတွင်း၊အပေးအတွက်အကြောင်းပြချက်သင်၏အသေးစား-အတောင်းဆိုမှုများကိုတရားစွဲဆို။ သင်သာအခြေခံအကျဆုံးသတင်းအချက်အလေးပေးနှင့်အတူပေါ်ဥပဒေကြောင်းအရကန်ထရိုက်ဒါမှမဟုတ်သဘောတူယုံကြည်ပါတီျချိုးဖောက်။ သင်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူးကိုးကားဥပဒေများသို့မဟုတ်သက်သေအထောက်အထားများကိုသို့မဟုတ်ပြပွဲနှင့်အတူကိုအောင်နိုင်စဉ်အတွင်းသင့်ရဲ့ပါးစပ်တင်ဆက်မှုမှာအကြား၊လိုအပ်ခဲ့လျှင်။ ဖြိုချ၏ပမာဏကိုသင့်ရဲ့ပြောဆိုချက်ကိုသို့အားလုံး၎င်း၏ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အစိတ်အပိုင်း:အမှန်တကယ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအဘို့၊ဥပမာ၊အဖြစ်တရားဝင်အတည်ဒဏ်ငွေနှင့်ပြစ်ဒဏ်များဆန့်ကျင်အဆိုပါတရား။ အချို့သေးငယ်တဲ့တောင်းဆိုမှုများတရားရုံးများကိုအဘယ်သူမျှမအာကာသများအတွက်စာသင်ရိုးရှင်းစွာအစစ်ဆေးတစ်သေတ္တာကိုညွှန်ပြ၏သဘောသဘာဝ။ နယူးယောက်မြို့အသေးစားပုံစံပဲ၊ဥပမာအားဖြင့်၊စာရင်းစစ်ဆေးပုံးနောက်နှစ်ဆယ်မှရှစ်ကွဲပြားခြားနားသောအကြောင်းတရားများလှုပ်ရှားမှုအတွက်၊ကနေဖြစ်ရတဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုမှမော်တော်ယာဉ်'ကို'စစ္ေ(ရပ်တန့်)။ ပုံစံလည်းကမ်းလှမ်းတစ်ခုတည်းလိုင်းသည်'အခြား(ဘီ)။ အတွက်နောက်ဆုံးဝါကျ၏ပြောဆိုချက်ကိုသို့မဟုတ်ပေးထားသောအာကာသအတွင်းအပေါ်ပုံစံပေး၊ဒေါ်လာစျေးငွေပမာဏ သင်သည်သင်၏ပြောဆိုချက်ကိုမှဆင်းခဲ့သည့်အရာခိုင်နှုန်း။ ဒီပုံအမည်အားဖြင့်အစက္ထဲတရား၏ငွေပမာဏကိုသတ်မှတ်ဖို့သင်၏ရင်၊သင့်အမှုအနိုင်ရ။ သင်တို့သည်လည်းအခွင့်တောင်းဆိုမဆိုကုန်ကျစရိတ်များအတွက်ဥပဒေကြောင်းအရအမှု၊ထိုသို့သောအဖြစ်အတွဲအခကြေးငွေနှင့်ကုန်ကျစရိတ်အများထမ်းဆောင်ကိုပြောဆိုချက်ကိုနှင့်တရားရုံးကအခေါ်အပေါ်အသိ။ နိမိတ်လက္ခဏာနှင့်ရက်စွဲကိုတောင်း၏အောက်ခြေတွင်ဖွဲ့စည်းပေးထားသောအာကာသအတွင်း၏အထံတော်၌တစ်စာချုပ်စာတမ်းလျှင်၊ပညတ်တရားအားဖြင့်လိုအပ်။ ပုံနှိပ်မှန်ကန်သောအပြင်သင့်ရဲ့အပြည့်အဝဥပဒေရေးရာက။ သင်သည်အရှေ့နေကိုယ်စားပြုသငျသညျအမှု၌၊သူလက်မှတ်ထိုးရမည်မှာသင့်နေရာပေးခြင်း၊လိပ်စာနှင့်ဖုန်းနံပါတ်များမိမိနေရာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏အဖြစ်(အချို့သောတရား)မိမိအပြည်နယ်ဘား။ တရားရုံးစာရေးလိမ့်မည်ဖိုင်၏ဖော်ပြချက်များ၏ပြောဆိုချက်ကိုလက်ခံသင့်က်ကြေး၊နှင့်သူမပြဿနာတစ်ခုခေါ်ရပါမယ်သောအဝတ်အပေါ်အသိ၊ကောင်းပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ၊လုပ်ငန်းစဉ်များမှတဆင့်ဆာဗာသို့မဟုတ်အားဖြင့်အမှတ်အၾကိဳက္ဆံုး။ တည်ထောင်သူ၏ဥက္ကဋ္ဌကိုကိုးကား။
Ռազմավարության Տույժի Պարտքերի Եւ Գործիքներ, Որ Պետք Է Բարելավել Պարտքի Հավաքագրումը
© 2021 အားလုံးရှေ့နေများအတွက်ဂျပန်အကြီးဆုံးအွန်လိုင်း။ အကြီးဆုံးဥပဒေရေးရာအ ရှေ့နေ။